ဆော်ဒီအာရေဗျ နို်င်ငံတွင် သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့် မြန်မာ အမျိုးသမီးများ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ၏ ရိုးရာ ဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင် ရမည်ဟုသိရ
ဆော်ဒီအာရေဗျနို်င်ငံတွင် သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့် မြန်မာအမျိုးသမီးများအနေဖြင့် သက်
ရရှိပါသည်။ “ဆော်ဒီနိုင်ငံဘက်က မြန်မာအလုပ်သမားတွေကို မကြာခဏခေါ်ယူမှုရှိပါတယ်။အဓိကခေါ်ယူတာက
တော့ အမျိုးသားတွေပါ။ အမျိုးသမီးတွေအတွက် အလုပ်ခေါ်ယူမှုရှိပေမယ့် ဆော်ဒီနိုင်ငံက အမျိုးသား ဦးစားပေး
နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက် အပြင်ထွက်ပြီး အလုပ်မလုပ်ရတဲ့ ဆေးရုံတွေမှာလုပ်ဖို့ ခေါ်တာများတယ်။ အမျိုးသမီးတွေအ
လုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင် မယ်ဆိုရင်လည်း ဘာသာရေးဥပဒေစည်းမျဉ်းတွေအရအမျိုးသမီးတွေဝတ်ဆင်တဲ့ရိုးရာ
ဝတ်စုံဝတ်ဆင်ပြီးမှ အပြင်ထွက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒါကလည်းအမျိုးသမီးတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ပါ”ဟုဆော်ဒီအာရေ
နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားခေါ်ယူမှုတွင် အမျိုးသားအများဆုံးပါဝင်နေပြီး လေအေးပေးစက်ပြုပြင်ရေး၊ယာဉ်
မောင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ အီလက်ထရွန်းနစ်စနစ်လုပ်ငန်းများ၌ အလုပ် လုပ်ကိုင်ရန်ခေါ်ယူမှုများပြီး အမျိုးသမီး
လုပ်သားခေါ်ယူမှုတွင်ပြင်ပသို့ ထွက်၍ အလုပ်လုပ်ခြင်းမပြုရသည့်ဆေးရုံလုပ်ငန်းများ၌ လုပ်ကိုင်ရန်မြန်မာနိုင်ငံမှ
သူနာပြုဆရာမများကို အများဆုံးခေါ်ယူသည်ဟုသိရသည်။ ဆော်ဒီနိုင်ငံကို အလည်သွားသည်ဖြစ်စေ၊ အလုပ်အ
တွက်သွားသည်ဖြစ်စေ၊ ဆော်ဒီကိုရောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ဘာသာရေးဥပဒေအရရိုးရာဝတ်စုံဝတ်ပြီး
မှ အပြင်ထွက်ရပါတယ်။ အလည်သွားတာဆိုရင်တော့ ရိုးရာဝတ်စုံဝတ်ရင်ရပါပြီ။ ခေါင်းဆောင်း စရာမလိုပါဘူး။
အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ ခေါင်းလည်းဆောင်းရတယ်။ လုပ်ငန်းခွင် ပြင်ပကိုသွားတာနဲ့ ယောက်ျား
ရှိရင် အမျိုးသားနဲ့အတူထွက်ရတယ်။ လူလွတ်ဆိုရင်လည်း အမျိုးသမီးတစ်ယောက်တည်းသွားလို့မရပါဘူး။အမျိုး
သမီးအဖော်တစ်ယောက်ပါရပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာ သက်မှတ်ချက်ကိုလိုက်နာခြင်းရှိ၊ မရှိကိုနေ
ရာတိုင်းမှာ ဘာသာရေးရဲတွေအစောင့်ချထားတဲ့အတွက် လိုက်နာခြင်းမရှိရင်ဖမ်းပါတယ်”ဟုဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ
သို့ မကြာခဏအလည်သွားရောက်လေ့ရှိသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးကပြောပြကြောင်း၂၀၀၉ခုနှစ်ဧပြီလ ၁ရက်နေ့ထုတ်
Weekly Eleven ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
ကင်ဆာ ဖြစ်စေသည့် ဂျွန်ဆင်ကလေး ခေါင်းလျှော်ရည် စူပါမားကက် အချို့တွင် ရောင်းချမှု ရပ်ဆိုင်း
ကင်ဆာဖြစ်စေသော ဓာတုပစ္စည်းပါဝင်သည့် ဂျွန်ဆင်ကလေးခေါင်းလျှော်ရည်ကို စူပါမားကက်အချို့
တွင် ရောင်းချမှုရပ်ဆိုင်းထားကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။ ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားစေသော ဖော်မယ်ဒီဟိုက် (Form-
aldehyde) နှင့် 1,4ဒိုင်းအောက်ဇင်း (1,4 Dioxane)တို့မှာကလေးများအတွက် ထုတ်လုပ်သော ရေချိုးကုန်ပစ္စည်း
များတွင် ပါဝင်နေကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိ၍ ဥရောပနိုင်ငံများ၌ ၂၀၀၇ခုနှစ်စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်မှစတင်ကာ တား
မြစ်ပိတ်ပင်ထားပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့တွင် ကင်ဆာရောဂါဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု သတိပေးကြေညာ
ထားကြောင်းသိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်အတွင်း ရောက်ရှိနေပြီး လူသုံးအများဆုံးဖြစ်သော ဂျွန်ဆင်ကလေး
ခေါင်းလျှော်ရည် တွင် အဆိုပါ ဓာတုပစ္စည်းနှစ်မျိုးပါဝင်နေကြောင်း (အယ်လ်အောရယ်) ကလေးဂျင်တယ်2in1
ခေါင်းလျှော်ရည်နှင့် ပါပါကင်ဒို အမြှုပ်ထဆပ်ပြာတို့တွင်လည်းတွေ့ရသည်။`သတင်းစာမှာပါတဲ့နေ့ကစပြီးဂျွန်ဆင်
ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ ဆပ်ပြာကိုမရောင်းတော့ဘူး၊ ဂျွန်ဆင်တံဆိပ် ပေါင်ဒါ၊ လိုးရှင်းနဲ့တခြား ပစ္စည်းတွေကို ရောင်း
တယ်၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ မတားသေးဘူး။ ကျွန်မတို့မှာ အတွေ့အကြုံရှိနေပြီ၊လက်ဖက်သိမ်းပြီးတာ
မကြာသေးဘူး။ နို့မှုန့်နဲ့ ရေသန့်မှာလဲ ကြုံခဲ့ပြီးပြီ၊ အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုရင်မရောင်းဘဲသိမ်းလိုက်တာပိုကောင်းမယ်
ထင်လို့ပါ။ ကလေးသုံးပစ္စည်း ထဲမှာ ဂျွန်ဆင်ကရောင်းအကောင်းဆုံး၊ လူကြိုက် အများဆုံးပါ´ ဟုစူပါမားကက်မှ
ဈေးကွက် မန်နေဂျာက ပြောသည်။ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် မတ် ၁၈ ရက်က ရေးသားဖော်ပြခဲ့သော သတင်း
အရ မြန်မာ့ဈေးကွက်တွင် ရောက်ရှိနေသော ဂျွန်ဆင် အမှတ်တံဆိပ် ကလေးခေါင်းလျှော်ရည်လည်း ပါဝင်ခြင်း
ကြောင့် ရောင်းချမှုကိုရပ်ထားသည်ဟုသိရသည်။ ကလေးသုံးရေချိုးကုန်ပစ္စည်း ၂၈မျိုးကို စစ်ဆေးရာ ၂၃မျိုးတွင်
လူသေအလောင်းများ မပုပ်ရန်ဆေးစီရင်သည့်အခါ အသုံးပြုသည့် ဖော်မယ်ဒီဟိုက်ဓာတုပစ္စည်းပါဝင်၍ ဦးနှောက်
ကင်ဆာ၊ နှာခေါင်းလေပြွန်ကင်ဆာနှင့် သွေးကင်ဆာဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်စေသည့် အမြှုပ်ထစေ
သော 1,4 ဒိုင်အောက်ဇင်းကို ပစ္စည်းအမျိုးအစား ၄၈မျိုးတွင် ၆၇ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်နေကြောင်း တွေ့ရသည်ဟု နိုင်ငံ
ပိုင်သတင်းစာ၏ ဘာသာပြန်သတင်းတွင်ဖော်ပြထားကြောင်း၂၀၀၉ခုနှစ်မတ်လ၃၁ရက်နေ့ ထုတ် Flower News
အင်းလျားလမ်းနှင့် တက္ကသိုလ် ရိပ်သာလမ်းတွင် အကြီးစား သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်များ ဆောက်လုပ်ခွင့် မပြု
ရန်ကုန်မြို့တော်၏ သင်္ကြန်ကာလအတွင်း လူစည်ကားမှုအများဆုံးနှင့် မဏ္ဍပ်တည်ဆောက်ရန်
လျှောက်ထားသူအများဆုံးဖြစ်သော အင်းလျားလမ်းနှင့် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းတို့တွင် အကြီးစား သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်
များဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ဘဲ အလတ်စား မဏ္ဍပ်များကိုသာ ဆောင်လုပ် ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း
သည်။သင်္ကြန်ကာလတွင် တည်ဆောက်မည့် မဏ္ဍပ်များအတွက် မည်သူမဆို လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းတည်
ဆောက်မည့်နေရာကို မြို့တော်စည်ပင်က စနစ်တကျစီစဉ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် ယာဉ်သွားလာ
မှုအဆင်ပြေစေရန်အတွက် လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းနေရာများကို အဓိကထားနေရာချ ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း
၄င်းကဆိုသည်။ မဏ္ဍပ်များကို ရန်ကုန်မြို့တော်အတွင်း၌ ပြည်လမ်းမှအပ ကျန်လမ်းများတွင် ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြု
သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လမ်းမအတိုင်းအရှည်ပေ ၅၀နှင့်အထက်ကို အကြီးစားမဏ္ဍပ်၊၂၅ပေနှင့် ၅၀ကြားကိုအလတ်
စား၊ ၂၅ပေအောက်ကိုအသေးစားမဏ္ဍပ်ဟု သတ်မှတ်ထားကြောင်း တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းနှင့် အင်းလျားလမ်း
တွင် မဏ္ဍပ်တစ်ခု၏ ပလက်ဖောင်းအသုံးပြုဈေးနှုန်းမှာကျပ် ၅၀၀၀၀ ဖြစ်ပြီး အခြားနေရာများတွင် မဏ္ဍပ်အကြီး
၃၀၀၀၀ကျပ် အလတ် ၂၀၀၀၀ကျပ်၊ အသေး ၁၀၀၀၀ ကျပ်သတ်မှတ်ထား၍ စပေါ်တင်ရကြောင်း၊ ပလက်ဖောင်း
ပျက်စီးသွားပါက စပေါ်ကြေးအပြင် ပျက်စီးမှုတန်ဖိုးအတိုင်းလျော်ကြေးပေးရမည်ဟုကတိစာချုပ်ဖြင့်သာဆောက်
လုပ်ခွင့်ပေးထားကြောင်း၊ မြို့တော်စည်ပင်အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား) မှ အကြီးတန်း အရာရှိတစ်ဦးက
ပြောကြားသည်။ ၂၀၀၈ခုနှစ်တွင် အင်လျားလမ်း၌ မဏ္ဍပ်ပေါင်း ၅၀၊ တက္ကသိုလ် ရိပ်သာလမ်းတွင် ၂၄ ခု၊ အခြား
နေရာများတွင်အကြီးစား ၁၆ခု၊ အလတ် ၁၄၃ခုနှင့် အသေး ၆၉ခုစုစုပေါင်း ၂၂၈ခု ရှိခဲ့ကြောင်း ၂၀၀၉ခုနှစ်မတ်လ
၃၀ရက်နေ့ထုတ် The Voice ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် ပျက်စီးသွားသော မိန်းမလှကျွန်း ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရန် FREDA စီစဉ်
နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် ပျက်စီး သွားသောမိန်းမလှကျွန်းကိုပြန်လည် ထူထောင်နိုင်ရန် ပြင်သစ် NGO တစ်ခုမှတစ်ဆင့်ဥရောပသမဂ္ဂ(EU) သို့တင်ပြထားကြောင်းသစ်တောသယံ ဇာတပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နှင့်ထိန်းသိမ်းရေးအသင်း(FREDA) ၏အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဦးအုန်း ကပြောကြားခဲ့သည်။
''နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် ပျက်စီး သွားတဲ့မိန်းမလှကျွန်းကိုပြန်လည် တည်ထောင်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ ဒီ စီမံကိန်းကိုပြင်သစ် NGO တစ်ခုက နေတစ်ဆင့် ဥရောပသမဂ္ဂကိုတင်ပြ ထားပါတယ်။ ဒီလိုပြန်လည်ထူ ထောင်မှုပြုလုပ်ရာမှာအဓိကပြုလုပ်ရ မှာက ဒီရေတောတွေအများအပြား ပြန်လည်စိုက်ပျိုးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ မုန် တိုင်းကြောင့်မိန်းမလှကျွန်းအနောက် ဘက်တစ်ခြမ်းလုံးပျက်စီးသွားခဲ့ပါ တယ်။ အရှေ့ဘက်အခြမ်းလည်း အ သင့်အတင့်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီကျွန်းမှာဒီရေတောဧက ၆၀၀၀ ကျော် ကိုပြန်လည်စိုက်ပျိုးသွားရမှာ ဖြစ်ပါ တယ်''ဟုဦးအုန်းက ဆိုပါသည်။ မိန်းမလှကျွန်းသည် ဧရာဝတီ တိုင်း၊ ဘိုကလေးမြို့နယ်တွင်တည် ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိဘေးမဲ့တောများ အနက်မှတစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်သည်။ အကျယ်အ၀န်းမှာဧက ၃၇၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် ဧက ၆၅၀၀ ၀န်းကျင်တွင်ပျက်စီးမှု များဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။
ထိုသို့ပြန်လည်ထူထောင်မှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် ဒီရေတောများပြန် လည်စိုက်ပျိုးထားခြင်းအပြင်စိုက်ပျိုး ထားသောအပင်များကိုထိန်းသိမ်းနိုင် ရန်အတွက်လည်းဘေးပတ်ဝန်းကျင် ရွာများ၏စားဝတ်နေရေးပြေလည်မှု များရှိစေရန် ပြုလုပ်ပေးရမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ စီမံကိန်းခန့်မှန်းကာလမှာ ငါးနှစ်နှင့် ၁၀ နှစ်အကြား ရှိနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်မှာလည်း ဒေါ်လာကိုးသိန်းဝန်းကျင် အထိရှိ မည်ဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားသည်။
FREDA အနေဖြင့် ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှစတင်၍ ဧရာဝတီတိုင်းတွင် ဒီရေတောများစိုက်ပျိုးခဲ့ရာ ယခု အခါ ဧက ၄၀၀၀ကျော်အထိစိုက်ပျိုး ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ဧရာဝတီ တိုင်းရှိ ဒီရေတောဧရိယာသည် ၁၉၇၅ ခုနှစ်ကဧကပေါင်း နှစ်သိန်းခွဲ ရှိခဲ့ရာမှ ယခုအခါအဆိုပါပမာဏ၏ ထက်ဝက်အောက်သာရှိတော့သည်ဟု ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနှင့်စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ ၏ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရှိရသည်။
လေဘေးသင့်ဒေသ၌ ရေနှင့် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာလေးသန်းတန်ဖိုးရှိ စီမံကိန်းတစ်ခုကို ဆောင်ရွက်မည်
လေဘေးသင့်ဒေသ၌ ရေနှင့် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ လေးသန်းတန် ဖိုးရှိ စီမံကိန်းတစ်ခုကို ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါစီမံကိန်းကိုကုလသမဂ္ဂ လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်သည့် UN-HABITAT က အ ကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်ကာယင်း ကဲ့သို့အကောင်အထည်ဖော်ရန်အ တွက် ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရက အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ လေးသန်း ပံ့ပိုးသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စီမံကိန်း အကောင်အထည် ဖော်ရခြင်းမှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလ ဆန်းပိုင်းက တိုက်ခတ်ခဲ့သောနာဂစ် မုန်တိုင်းသင့်ဒေသများရှိပြည်သူများ ၏ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်စေရန် အတွက်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
လေဘေးသင့် ဘိုကလေး၊ဒေးဒရဲ၊ ကွမ်းခြံကုန်း၊ ဖျာပုံနှင့် ကျိုက် လတ်မြို့နယ်တို့ရှိရပ်ရွာအသိုင်းအ ၀ိုင်း ၂၅၀၌ စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ လေဘေးသင့်ဧရာဝတီတိုင်း၌ ရေအတွက်အဓိကအရင်းအမြစ် သည် မိုးရေဖြစ်ကြောင်း၊ နာဂစ်မုန် တိုင်းကြောင့်ရေမလုံလောက်သည့် ပြဿနာကို လေဘေးသင့်ဧရာဝတီ တိုင်း ဒေသအချို့တွင်ယခုနွေရာသီ ကာလ၌ ကြုံတွေ့နေရကြောင်းနှင့် မိုးရေခံမည့် အရင်းအမြစ်များမှာလည်းနာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့်ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံ ဆေးခန်းများ လူနာအပေါ် တာဝန်မဲ့မှုများ ပြုလုပ်ပါက အရေးယူ ခံရမည်
ရန်ကုန်ရှိ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံဆေးခန်းများဆေးကုသခံလူနာအပေါ် တာဝန်မဲ့မှုများပြုလုပ်ပါက အရေးယူ
ခံရ မည်ဖြစ်ကြောင်း YCDC ၏အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးတစ်ဦးကပြောသည်။ ပြီးခဲ့သည့်မတ်လ ၂၂ရက်နေ့က ကမ္ဘာ
အေးစေတီလမ်းပေါ်ရှိ ပုဂ္ဂလိကဆေးခန်းတစ်ခုကခွဲလူနာတစ်ဦးအား တာဝန်မဲ့မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်ကို အကြောင်းပြု၍
၄င်းကအထက်ပါအတိုင်းပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။ `အဲဒီဆေးခန်းမှာ လည်ပင်းသိုင်းရွိုက် ခွဲစိတ်လူနာတစ်ဦးက ခွဲ
စိတ်မှုခံယူတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့(၂၂-၃-၂၀၀၉)ခွဲတယ်။ တနင်္လာနေ့လည်း လာမကြည့်ဘူး။ အင်္ဂါနေ့လည်း လာမ
ကြည့်ဘူး။ ဒါနဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖုန်းနဲ့ ပြောတော့လာတယ်။ ကြည့်မသွားဘူး။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူနာရှင်ဖက်က အ
ကြောင်းကြားလို့ YCDCကသတိပေးလိုက်ပြီ´ ဟုယင်းကဆိုသည်။နောင်မှာအဲဒီလိုတာဝန်ပေါ့လျော့လာရင်အရေး
ယူမယ်´ ဟု၎င်းကဆက်ပြောသည်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ်မျိုးကြုံရပါကရန်ကုန်တိုင်းကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့်YCDCအား
အသိပေးတိုင်ကြားနိုင် ကြောင်းယင်းကဆိုသည်။ `ကျွန်တော်တို့ကတော့ ပုဂ္ဂလိကအထူးကု ဆေးရုံဆေးခန်းတွေ
မှာ မပြဖူးပါဘူး။ အဲဒီလိုဆေးခန်းတွေမှာ ကုသရမယ့်ဝေဒနာမျိုးမဖြစ်ဖူးတာကလည်း ကုသိုလ်တစ်မျိုးပဲနေမှာပါ´
ဟုအလုပ်ကြမ်းလုပ်သည့် အမျိုးသားတစ်ဦးကပြောသည်။ ရန်ကုန်ရှိ လူနာ၊ လူနာနှင့်ကျန်းမာရေး ၀န်ထမ်းများအ
ကြားတွင် အပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိကာ လူနာအားအကြင်နာတရား ထားရှိရန် အထူးလိုအပ်ကြောင်း ပြောသည်။
YCDC ကဆေးရုံဆေးခန်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်များချပေးထားပေးသည်မှာ ယခုအခါ ရန်ကုန်နယ်နိမိတ်တွင် လုပ်ငန်း
လိုင်စင်ပေါင်း ၉၀၇ခုရှိကြောင်း ၂၀၀၉ခုနှစ်ဧပြီလ၂ရက်နေ့ထုတ်ပြည်မြန်မာဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ ပစ္စည်းတွေ ပြန်ရောင်းနိုင်ပြီ
“လက်ဖွဲ့တွေများပြီးထားစရာနေရာမရှိတဲ့သူတွေ၊ မလိုတာတွေ၊ ပိုနေတဲ့သူတွေအဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးတာ”လို့
လက်ဖွဲ့တွေပြန်ဝယ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ခိုင်ရတနာကမရတနာကပြောပါတယ်။ မလိုတာတွေကိုပဲ ရောင်းမယ်ဆို
လည်းရပါတယ်။ လက်ဖွဲ့ အကုန်လုံးကို အပြတ် ရောင်းမယ်ဆိုလည်းရပါတယ်။ ပြန်ဝယ်ဈေးက ပေါက်ဈေးထက်
ထက်ဝက်လျှော့ပြီး ယူတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ “အရင်ကတည်းက မီးဖိုးချောင်သုံး ပစ္စည်းတွေဖြန့်နေတာ၊ ဥပမာ ဆိုင်
တွေကို ပစ္စည်းတစ်ခု ကျပ် ၂၀၀နဲ့ပေးရင်ဆိုင်က ကျပ် ၃၀၀ လောက်ပြန်ရောင်းတာ၊ ကိုယ်ကကျပ်၁၅၀လောက်နဲ့
ပြန်ဝယ်ပေးတဲ့သဘောပဲ” လို့ မရတနာကပြောပါတယ်။ ရောင်းမယ့် ပစ္စည်းကို ယူလာပေးရပါမယ်၊ ပစ္စည်းမျိုးစုံပါ
ရင် ပစ္စည်းအလိုက် ဈေးကွက်မှာ ပေါက်ဈေးကို စုံစမ်းဈေးဖြတ်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်ပစ္စည်းပေးပြီးတစ်ပတ်အတွင်း
ငွေရမယ်လို့ ဆိုတယ်။ ပစ္စည်းတွေ မပျက်စီးဖို့ တော့ လိုပါတယ်။ ဝယ်ယူတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းသူ့ဈေးကွက်နဲ့သူ
ပြန်လည် ရောင်းချမှာဖြစ်ကြောင်း ၂၀၀၉ခုနှစ် မတ်လ ၂၀ရက်နေ့ထုတ် မော်ဒန်ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
Credit by khitlunge.com & weekly eleven journal
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/31/20090အကြံပြုခြင်း
ရတနာပုံ မြို့နန်းတည် ပဉ္စမ သင်္ဂါယနာတင် မင်းတုန်းမင်း (၁၈၅၃ - ၁၈၇၈)
မှူးမတ် အပေါင်းတို့ စုရုံး၍ မင်းသားတို့ အမည် စာရင်းကို ကြည့်ရှုနေဆဲ ကင်းဝန်မင်းကြီးသည် နန်းရင်ပြင်သို့ ထွက်လာကာ သီပေါမင်းသား၏ အမည်ဘေးတွင် ကြက်ခြေ ခတ်လိုက်လေသည်။
. . မင်းတုန်းမင်းသည် တိုင်းပြည်အတွက် တတ်နိုင်သမျှ အစွမ်းကုန် ဆောင်ရွက်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် မင်းတုန်းမင်း၏ လက်ထက်၌ ဗြိတိသျှ နယ်ချဲ့ အင်အားသည် အထွတ်သို့ ရောက်နေပြီ ဖြစ်လေသည်။ ထိုကြောင့် လွတ်လပ်သော နိုင်ငံ အဖြစ်ဖြင့် တည်တန့် နေစေရန် မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လည် တည်ထောင်မည်ဟု ရည်ရွယ်ချက် ထားရှိ သော်လည်း အချည်းနှီး ဖြစ်ခဲ့ ရလေသည် . . . " . . . [၁၉၆၂ ခု၊ ပဌမနှိပ်၊ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်၊ မြန်မာနှင့် အရှေ့တိုင်း ရာဇဝင် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ကျော်သက် ရေးသားတဲ့ 'ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်း' စာအုပ် အခန်း (၄) မှ "ရတနာပုံ မြို့နန်းတည် ပဉ္စမ သင်္ဂါယနာတင် မင်းတုန်းမင်း (၁၈၅၃ - ၁၈၇၈)" အကြောင်းကို ထုတ်နှုတ် ကူးယူ ဖော်ပြလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။]
ရတနာပုံ မြို့နန်းတည် ပဉ္စမ သင်္ဂါယနာတင် မင်းတုန်းမင်း (ဝဲထိပ်) နိုင်ငံခြားသား သံအဖွဲ့ဝင်များကို လက်ခံ တွေ့ဆုံတော်မူ ပုံ (ယာထိပ်)၊ အောင်ပင်လယ်တွင် လယ်ထွန် မင်္ဂလာ သဘင် ဆင်ယင် ကျင်းပတော်မူ ပုံ (ဝဲအောက်) နှင့် ကရဝိတ် ဖောင်တော်နှင့် ထွက်တော်မူလာပုံ (ယာအောက်)။
အောက်မြန်မာနိုင်ငံအား ဗြိတိသျှတို့က သိမ်းပိုက် လိုက်ခြင်းကို မြန်မာတို့ မည်သည့် အခါမျှ ဖွင့်ဟ ဝန်ခံခြင်း မပြုခဲ့ချေ။ သို့သော် နေပြည်တော်တွင် ဖြစ်ပျက် နေပုံများမှာ၊ ဗြိတိသျှတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်းကို ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အနည်းနှင့် အများ အသိအမှတ် ပြုသကဲ့သို့ ရှိချေသည်။ ပုဂံမင်း၏ ညီ မင်းတုန်းမင်းသားသည် ဗြိတိသျှတို့ တန်ခိုးအာဏာ မည်မျှ ကြီးမား ကျယ်ပြန့်ကြောင်းကို သိနားလည်သူ ဖြစ်သဖြင့် စစ်မလိုလားသူ တစု၏ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်၍ လာသည်။ ဤတွင် ပုဂံမင်းသည် မင်းတုန်းမင်းသားကို မလိုမုန်းတီး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုကြောင့်၊ မင်းတုန်းမင်းသားသည် ညီတော် ကနောင်မင်းသားနှင့် အတူ ရှေးထုံးနည်း အတိုင်း ၁၈၅၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၌ ရွှေဘိုသို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင် လေသည်။ ရွှေဘိုတွင် နောက်လိုက်များ စုရုံးပြီးနောက် ထီးနန်းကို သိမ်းပိုက်ရန် ကြံစည်ရာ အောင်မြင်နိုင်သည့် အခြေသို့ ရောက်ခဲ့သည်။ မကွေးမင်းကြီးသည် မင်းတုန်းမင်းသားကို ဘုရင် အဖြစ် လက်ခံ ကျေညာ၍ မင်းတုန်းမင်း၏ သစ္စာကို ခံယူခြင်း မပြုသူတို့အား ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်ခြင်း ပြုသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် မင်းတုန်းမင်းသားသည် အမရပူရ မြို့တော်တွင်းသို့ ဝင်၍ ထီးနန်းကို သိမ်းပိုက်သည်။
ဤသို့ ဖြစ်ပျက် နေဆဲတွင် အောက်မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဗြိတိသျှတို့နှင့် တိုက်ခိုက် နေသော စစ်တပ်များကို ပြန်လည် ခေါ်ယူပြီး ဖြစ်ကာ မင်းတုန်းမင်း နန်းတက်သည်နှင့်ပင် ဗြိတိသျှတို့ကို ခုခံ တိုက်ခိုက်ခြင်းသည်လည်း ရပ်စဲ သွားတော့သည်။
မင်းတုန်းမင်းသည် အမြှော်အမြင်နှင့် ပြည်စုံ၍ ငြိမ်းချမ်းရေးကို နှစ်သက်သော မင်းတပါး ဖြစ်သည်။ မင်းတုန်းမင်းသည် တိုင်းပြည်အတွက် တတ်နိုင်သမျှ အစွမ်းကုန် ဆောင်ရွက်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် မင်းတုန်းမင်း၏ လက်ထက်၌ ဗြိတိသျှ နယ်ချဲ့ အင်အားသည် အထွတ်သို့ ရောက်နေပြီ ဖြစ်လေသည်။ ထိုကြောင့် လွတ်လပ်သော နိုင်ငံ အဖြစ်ဖြင့် တည်တန့် နေစေရန် မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လည် တည်ထောင်မည်ဟု ရည်ရွယ်ချက် ထားရှိသော်လည်း အချည်းနှီး ဖြစ်ခဲ့ရလေသည်။
မင်းတုန်းမင်း နန်းတက်ပြီးနောက် ဆောင်ရွက်သည့် ပထမ အချက်မှာ နေပြည်တော်တွင် ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်ထားသော ဥရောပ တိုက်သား အားလုံးကို အကျဉ်းမှ လွှတ်၍ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် စကားဆိုရန် မြန်မာ သံအမတ်များကို စေလွှတ်မည့် အကြောင်း၊ ဗြိတိသျှတို့ထံ စကားပါးလိုက်ခြင်း ဖြစ်လေသည်။
ဗြိတိသျှတို့ သိမ်းပိုက်သော နယ်မြေများကား မြေထဲမြို့ မြောက်ဘက်၊ ရခိုင်နယ်စပ်မှ တောင်ငူ မြောက်ဘက်၊ ကရင်နီ နယ်စပ်သို့ တိုင်အောင် အရှေ့ အနောက် နယ်နမိတ်မျဉ်း၏ တောင်ဘက်ပိုင်း တခွင်လုံး ဖြစ်လေသည်။ မကွေးမင်းကြီး ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာ သံအဖွဲ့သည် ပဲခူးဒေသ ဝန်ရှင်တော် မင်းကြီးသစ် ဖြစ်သော ဖယ်ရာနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ဗြိတိသျှတို့သည် မြန်မာ့ နယ်မြေများကို အဓမ္မ သိမ်းပိုက်ရန် မသင့်ကြောင်း စကား ဆိုကြလေသည်။ ဗြိတိသျှတို့က အောက်မြန်မာနိုင်ငံ (ပဲခူး) ကို ဗြိတိသျှတို့ သိမ်းပိုက်ကြောင်း မြန်မာများ လက်မှတ် ရေးထိုး၍ အသိအမှတ်ပြုလျှင် ပြည်မြို့ မြောက်ဘက်ရှိ ဒေသများကို မြန်မာမင်း လက်သို့ ပြန်လည် အပ်နှင်းမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုလေသည်။
ဗြိတိန် နိုင်ငံရှိ အစိုးရနှင့် သတင်းစာများကမူ စစ်ပြေငြိမ်းရေး စာချုပ်အား မြန်မာ နေပြည်တော်၌ပင် ရေးထိုး စေရမည် ဟူသော မြန်မာ အသရေ ညှိုးစေမည့် အချက်ကို တဖက်စီးနင်း တောင်းဆို ကြလေသည်။ သို့ရာတွင် ဒါလဟိုဇီသည် မင်းတုန်းမင်းက နယ်စပ်ရှိ မြန်မာ အရာရှိများထံ စစ်တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ရပ်စဲရန် အမိန့် ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြား လိုက်သော အခါ ဒါလဟိုဇီသည် မိမိ အလိုအတိုင် အင်္ဂလိပ် မြန်မာ စစ်ပွဲ ရပ်စဲပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာ လိုက်လေသည်။
ဤသို့ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ စစ်ပွဲ ရပ်စဲလိုက်သော်လည်း အောက်မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြန်မာများက ဗြိတိသျှ အုပ်ချုပ်ရေးကို လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာ မရှိသေးသဖြင့် ဗြိတိသျှ တပ်များသည် စစ်တိုက်ရန် အသင့် ပြင်ဆင်ထားလျက် ရှိရသည်။ ဒါလဟိုဇီသည် ၁၉ ရာစု ဥရောပတိုက်သားများ ယူဆသကဲ့သို့ တိုင်းရင်းသားတို့သည် ဥရောပ တိုက်သားတို့၏ အုပ်ချုပ်ရေးကို လိုလိုချင်ချင် လက်ခံ လိုကြသည်ဟု စိတ်ချ ယုံကြည်ခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် အောက်မြန်မာ နိုင်ငံသားတို့သည်လည်း ဗြိတိသျှတို့ကို လိုလားစွာ လက်ခံလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ဗြိတိသျှတို့သည် ၃ နှစ်တိုင်တိုင် ပြောက်ကျား တပ်စုများကို တိုက်ခိုက် နှိမ်နင်း ခဲ့ရလေသည်။ ၎င်းတို့ကို ခုခံသူတို့အား မိမိ နိုင်ငံအတွက် တိုက်ခိုက်ကြသော မြန်မာ မျိုးချစ်များ အဖြစ်နှင့် မဟုတ်ဘဲ ဓားပြ လူဆိုးများ အဖြစ်နှင့်သာ ပြောဆိုလေ့ ရှိကြသည်။ မည်သို့ ဖြစ်စေ အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသော ဗမာ့သားကောင်း ဗိုလ်မြတ်ထွန်း ကဲ့သို့သော ခေါင်းဆောင်မျိုးကို မူကား မြန်မာ့ မျိုးချစ် ပုဂ္ဂိုလ် တဦးအနေဖြင့် အသိအမှတ် မပြုဘဲ မနေနိုင်တော့ချေ။ ဗိုလ်မြတ်ထွန်း အကြောင်းကို ဒါလဟိုဇီက လူပေါင်း ၄,ဝဝဝ ကို အုပ်ချုပ်၍ ဗြိတိသျှတို့၏ တိုက်ခိုက်ခြင်းကို သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် တွန်းလှန်နိုင်ကာ ဗြိတိသျှတို့ အသက်ပေါင်း များစွာ ကျဆုံးပြီးမှ အရေးနိမ့်ရသဖြင့် ခေါင်းဆောင်ကောင်း တဦး အဖြစ် လည်းကောင်း၊ စစ်သားကောင်း တဦး အဖြစ် လည်းကောင်း၊ လေးစား အပ်သည်ဟု မှတ်ချက် ရေးသား ထားလေသည်။ ၁၈၅၇ ခုနှစ်တွင် ကရင် မင်းလောင်း တဦးက ခေါင်းဆောင်၍ သူပုန်ထရာ မြစ်ဝက္ဆွန်းပေါ် တခွင်လုံးသို့ ပျံ့နှံ့သွား၍ ပဲခူးဒေသတွင် ဗြိတိသျှတို့သည် ငြိမ်ဝပ် ပိပြားစေရန် ရှစ်နှစ် နီးပါး ဆောင်ရွက် ခဲ့ရလေသည်။
ဗြိတိသျှတို့က မိမိတို့၏ အုပ်ချုပ်ရေးကို အန်တုခြင်း မပြုနိုင်စေရန် မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်း၌ ကြိုးစား နေကြဆဲ အချိန်တွင် မင်းတုန်းမင်းသည် ကုန်းဘောင်မင်းတို့တွင် အတိုးတက်ဆုံးနှင့် အရည်အချင်း အပြည့်ဆုံးသော မင်းတပါး အဖြစ်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်း၌ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိလေသည်။ မင်းတုန်းမင်းသည် နောင်အရှည် ဆက်လက်၍ ဥရောပ တိုက်သားတို့၏ စစ်အင်အားကို မြန်မာတို့ ဘက်ပြိုင်နိုင်စွမ်း မရှိဟု ဆုံးဖြတ်ထားဟန် တူလေသည်။ မိမိ၏ တာဝန်မှာ ဗြိတိသျှတို့နှင့် ဆက်ဆံရာ၌ ရနိုင်သရွေ့ အကျိုး ဖြစ်ထွန်းအောင် ကြံဆောင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း နားလည်ဟန် တူသည်။ လတ်မင်းကြီး ဒါလဟိုဇီ ကိုယ်တိုင်က မင်းတုန်းမင်း၏ အကျင့် စာရိတ္တနှင့် နောက်ကြောင်း ရာဇဝင်သည် မင်းတုန်းမင်းအား မြန်မာ ဘုရင်တို့တွင် လိမ္မာရေးခြား အရှိဆုံး၊ စိတ်အရှည်ဆုံး၊ သဘော အကောင်းဆုံး၊ မင်းဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှား စေသည်ဟု ရေးမှတ် ထားလေသည်။
ထိုအချိန်၌ ဗြိတိသျှတို့သည် မြန်မာ့ နန်းတော်တွင် ဗြိတိသျှ ကိုယ်စားလှယ် ခန့်ထားရန် တွန့်ဆုတ်လျက် ရှိနေသည်။ သို့သော် မြန်မာတို့၏ အပြုအမူ အကြံအစည်များကို သိရန် လွန်စွာ အရေးကြီးသောကြောင့် အထောက်တော် အရာရှိများ အဖြစ်ဖြင့်၊ ရန်ကုန်မြို့ တရုတ်တန်းရှိ လတ္တာလမ်းဟု နာမည်တွင် ရစ်စေသည့် ကပ္ပတိန် လတ္တာနှင့် အာလံမြို့ဟု နာမည် တွင်ရစ်စေသည့် မေဂျာ အာလံတို့ကို ခန့်အပ် လိုက်လေသည်။ ထိုသူတို့ကို မကျေမနပ် သေး၍ မြန်မာ အမျိုးသမီးနှင့် ထိမ်းမြားသော စကော့လူမျိုး ကုန်သည် သောမတ်စပီးယားကို ငှားရမ်း လိုက်ပြန် လေသည်။ မင်းတုန်းမင်းသည် ဗြိတိသျှနှင့် ဆက်သွယ်မှု ရသည့် အခွင့်အရေးကို လက်မလွှတ်တမ်း ဆုပ်ကိုင် ထားလေသည်။ အောက်မြန်မာနိုင်ငံ၏ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းသည် အင်္ဂလိပ် မြန်မာ စစ်ပွဲကြောင့် ပျက်စီးခဲ့ရာ ၁၈၅၃ မှ ၁၈၅၄ ခုနှစ် အတွင်း ဗြိတိသျှတို့ သိမ်းပိုက်ခဲ့သော ဒေသများတွင် အစာရေစာ ရှားပါး ကြပ်တည်း ခဲ့လေသည်။ မင်းတုန်းမင်းသည် ဘုရင့် အမိန့်ဖြင့် အထက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထွက်သမျှ ကုလားပဲနှင့် ဂျုံတို့ကို သိမ်းကျုံး ဝယ်ယူရာ၊ ပဲတင်းပေါင်း ၁ဝ,ဝဝဝ နှင့် ဂျုံတင်းပေါင်း ၂ဝ,ဝဝဝ ရသည်။ ပဲကို တင်း ၁ဝဝ လျှင် ကျပ် ၂ဝဝ ဈေးနှင့် လည်းကောင်း၊ ဂျုံကို ကျပ် ၂၅ဝ ဈေးနှင့် လည်းကောင်း၊ ဗြိတိသျှ စစ်တပ်ကို ရောင်းချသည်။ ဤ ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းဖြင့် မင်းတုန်းမင်းသည် အေးချမ်းစွာ မိမိ တိုင်းပြည်ကို ခေတ်မှီ၍ အင်အား တောင့်တင်းသော နိုင်ငံ အဖြစ်သို့ ရောက်စေရန် လိုလားကြောင်း၊ ထင်ရှား စေခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် ဗြိတိသျှတို့သည် ခရိုင်းမီးယန်း စစ်ပွဲနှင့် အိန္ဒိယ တပ်တွင်း ထောင်ထားမှုတို့ကြောင့် အခက်အခဲ ကြုံတွေ့ရသော အခါ မင်းတုန်းမင်းသည် ဗြိတိသျှကို ရန်မမူ ငြိမ်းအေးစွာပင် နေခဲ့သဖြင့် မင်းတုန်းမင်း၏ သဘောထား အမှန်ကို ပေါ်လွင် စေခဲ့သည်။
ပြည်တွင်း ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများ။
မင်းတုန်းမင်း၏ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများမှာ များပြား လှသည်။ ၎င်းတို့မှာ နိုင်ငံတော် အစိုးရ အတွက် တာဝန် ကျြွေ့ပန်ရန်နှင့်၊ ဝတ္တရားများ ဆောင်ရွက်ရာ၌ စရိတ်စက သက်သာ ချောင်ချိစေရန် ဟူသော ဝါဒနှင့် ကိုက်ညီခွင့် ရကြလေသည်။
မင်းတုန်းမင်း၏ အကြံအစည်ကို ပထမ အကြိမ် ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားမှုက အကောင်အထည် ပေါ်စေခဲ့သည်။ စက်မှု လက်မှု ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး တို့ကိုလည်း နိုင်ငံ အစိုးရပိုင် ပြုလုပ်လေသည်။ မင်းတုန်းမင်း၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ အခွန်တော် ကောက်ခံခြင်းကို ဖျက်သိမ်းရန် ဖြစ်လေသည်။ သို့သော် လုပ်ငန်း အရပ်ရပ်များ မတွင်ကျယ်သေးမီ အခြေခံ ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ရလေသည်။
၁၈၅၄ ခုနှစ်တွင် တနိုင်ငံလုံး၌ သုံးစွဲသော အချိန်အတွယ် အတိုင်းအတာများကို ဘိုးတော်ဘုရား လက်ထက်က သုံးခဲ့သည့် အတိုင်း စံပြု သုံးစွဲရမည်ဟု အမိန့် ထုတ်ပြီးနောက် အချိန်အတွယ် အတိုင်းအတာ နမူနာများကို နိုင်ငံအနှံ့ ဝေငှ ဖြန့်ချီလေသည်။ ၁၈၅၇ ခုနှစ်တွင် ဂေါတမ ဗုဒ္ဓ ပွင့်တော်မူစဉ်က စ၍ အများပြည်သူတို့သည် အခွန်တော်ကို ဆယ်ဘို့တဘို့ ဆက်သ ခဲ့ရသည့် နည်းအတိုင်း ပြည်သူ ပြည်သားတို့ထံမှ အခွန်တော်ဖြင့် ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းသာ ကောက်ယူမည် ဖြစ်၍ မည်သည့် အရာရှိကမျှ တိုင်းသူ ပြည်သားတို့ထံမှ ထိုထက်ပို၍ ကောက်ယူခြင်း မပြုရဟု အမိန့် ထုတ်ပြန် လိုက်သည်။ တဖြည်းဖြည်းဖြင့် ဤစနစ်သည် အထက် မြန်မာနိုင်ငံ တခွင်လုံးတွင် ပျံ့နှံ့ သွားလေသည်။ မင်းမှုထမ်းတို့အား လခပေးသည့် စနစ်ကိုလည်း စတင် တီထွင်လေသည်။ ဤ စနစ်မှာ တံစိုး လက်ဆောင် စားတတ်သည့် အလေ့ကို လုံးဝ ပယ်ဖျက်နိုင်ခြင်း မရှိသော်လည်း အများ ပြည်သူတို့အား မည်မျှ ပေးသင့် မပေးသင့်ကို ရှင်းလင်းစွာ သိမြင်စေသည်။ ၁၈၆၅ ခုနှစ်၌ မန္ဈလေး နန်းမြို့တော် အတွင်းတွင် ဒင်္ဂါးသွန်း စက်ရုံတခု တည်၍ အရွယ် အလေးချိန် ငွေသား တညီတည်း ဖြစ်သော ဒေါင်းဒင်္ဂါးများကို သွန်းလုပ် စေသည်။ ဤသို့ဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးကို ပိုမို တွင်ကျယ် စေခဲ့လေသည်။
လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းတွင် မင်းတုန်းမင်းသည် အထူး ဝါယမ စိုက်ထုတ်ကာ ငွေကုန် ကြေးကျ အတန်များများ ခံခဲ့လေသည်။ ဗြိတိသျှ တို့သည်လည်း မိမိတို့ ပိုင်နက် ဖြစ်သော အောက်မြန်မာ နိုင်ငံတွင် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး တိုးတက်မှု အတွက် ကြိုးပမ်း ကြလေသည်။ ဧရာဝတီနှင့် စစ်တောင်း မြစ်ဝှမ်းတို့တွင် မီးရထားလမ်းများ ဖောက်လုပ် ကြသည်။ ရန်ကုန်၊ ပြည် မီးရထားလမ်းသည် ၁၈၇၇ ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးလေသည်။ အစိုးရ သင်္ဘောများကို ဝယ်ယူလိုက်သည့် ကုမ္ပဏီငယ်ကိုလည်း ၁၈၆၈ ခုနှစ်တွင် ဧရာဝတီ သင်္ဘော ကုမ္ပဏီ အမည်ဖြင့် အစိုးရမှ အသိအမှတ် ပြုလိုက်လေသည်။ ဦးစွာ ပထမ မန္ဈလေးသို့ တပတ်တခါ သင်္ဘော ထွက်စေ၍ ဗန်းမော်သို့ တလ တကြိမ် ထွက်စေသည်။ ၁၈၇၅ ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီက သင်္ဘောသစ် ၅ စင်း နှင့် ကုန်တွဲ ၆ စင်းကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ တင်သွင်းလေသည်။ အောက်မြန်မာနိုင်ငံ၌ ရခိုင်နှင့် တနင်္သာရီ ဒေသများရှိ ဆိပ်ကမ်း မြို့ငယ်များ ကိုလည်း ဗြိတိသျှ အိန္ဒိယ မီးသင်္ဘော ကုမ္ပဏီပိုင် သင်္ဘောများဖြင့် ရန်ကုန်နှင့် ကူးလူး ဆက်ဆံ ခဲ့လေသည်။ ပီနန်နှင့် စင်္ကာပူ သို့လည်း သင်္ဘော မှန်မှန် ထွက်စေ ခဲ့လေသည်။ ၁၈၇၁ ခုနှစ်တွင် အီဂျစ် နိုင်ငံ၌ စူးအက်တူးမြောင်း ဖွင့်လှစ်ပြီးသော အခါ ဥရောပမှ သင်္ဘောများသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ တိုက်ရိုက် ပေါက်ရောက် လာကြလေသည်။ မင်းတုန်းမင်းသည် သင်္ဘောကြီး ၅ စင်းကို ဝယ်ယူကာ သင်္ဘောငယ်ပေါင်း များစွာလည်း လက်ဝယ် ရှိလေသည်။ ထိုမျှမက ကုန်သည်များ၏ လှေငယ်များကိုလည်း ငှားရမ်း အသုံးပြု နိုင်လေသေးသည်။
မင်းတုန်းမင်းသည် ကြေးနန်း စနစ်၏ တန်ခိုးကို နားလည်သူ ဖြစ်သည့် အတွက် မြန်မာ လူငယ်များကို ကြေးနန်းရိုက် အတတ် သင်ကြားရန် အမိန့် ထုတ်သည်။ မကြာမြင့်မီ မို့စ်ကုဒ် စနစ်ကို အခြေခံပြု၍ ကြေးနန်းပို့သည့် စနစ်ကို သင်ကြားစေကာ မြန်မာ စာလုံးဖြင့် မို့စ်ကုဒ် စနစ်ကို တီထွင်လေသည်။ မင်းတုန်းမင်းသည် မြန်မာ့ သယံဇာတ ပစ္စည်းများကို အပြည့်အဝ အသုံးချနိုင်အောင် ပြုလုပ်၍ လိုသမျှ ပစ္စည်းကို ထုတ်လုပ်နိုင်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ပြင်ပမှ ကုန်ပစ္စည်းများကို အားကိုးနေရန် မလိုဟု ကောင်းစွာ သဘောပေါက် လေသည်။
မင်းတုန်းမင်းသည် စောစီးစွာပင် မြန်မာနိုင်ငံသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် ကုန်ကြမ်းထွက် သတ္ထု တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်း၊ သစ်လုပ်ငန်း များကိုသာ အားကိုး နေလျှင် ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးတွင် လည်းကောင်း၊ လူနေမှု အဆင့်အတန်းတွင် လည်းကောင်း၊ လွန်စွာ နိမ့်ကျမည်ကိုလည်း သိနားလည်ဟန် တူလေသည်။ ထို့ကြောင့် စက်မှု လုပ်ငန်း အတွက် စက်ရုံ အမျိုးမျိုးကို ဥရောပမှ စက်ကိရိယာ ပစ္စည်းများဖြင့် တည်ဆောက်စေကာ တခါတရံ ဥရောပ တိုက်သားများကိုပင် ငှားရမ်း အုပ်ချုပ် စေခဲ့သည်။ စက်ရုံများမှာ အထည်အလိပ် (အထူးသဖြင့် ဝါဂွမ်းနှင့် ပိုး) ရက်လုပ်သည့် စက်ရုံများနှင့် ချိပ်၊ ရှား၊ မဲနယ်ချက်ရုံ၊ သကြားစက်၊ လွှစက်၊ ဆန်စက်၊ ဂျုံစက်တို့ အပြင် သေနတ်နှင့် အမြောက် သွန်းလုပ်သော စက်ရုံများ ဖြစ်လေသည်။ ၁၈၇၂ ခုနှစ်သို့ ရောက်သော် အမျိုးမျိုးသော စက်ရုံပေါင်း ၅ဝ မက တည်ဆောက်ပြီး ဖြစ်လေသည်။ မင်းတုန်းမင်းသည် စက်ရုံ လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်း ဆောင်တာ မှန်သမျှကို မိမိ စိတ်ချ ယုံကြည်ရသော မက္ခရာ မင်းသားကြီးအား အပ်နှင်းသည်။
ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး စီမံကိန်း။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြားသား ကုန်သည်များနှင့် ပြိုင်ဆိုင် နိုင်လောက်အောင် အရင်းအနှီး တောင့်သူမှာ မင်းတုန်းမင်း တပါးသာလျှင် ရှိလေသည်။ မင်းတုန်းမင်းသည် ပြည်တွင်း ပြည်ပ ရောင်းဝယ်ရေး နှစ်ခုစလုံးကို ဆောင်ရွက် လေတော့သည်။ မင်းတုန်းမင်းသည် နိုင်ငံပ ကူးသန်း ရောင်းဝယ်မှုကို ချဲ့ထွင်ရန် ယူနန်နှင့် ကုန်ကူးသန်းမှုကို အားပေးခြင်း၊ အိန္ဒိယနှင့် ပါရှား နိုင်ငံများသို့ သံ စေလွှတ်ခြင်း၊ စပိန်၊ အီတလီ၊ ပြင်သစ်တို့နှင့် စီးပွားရေး အားဖြင့် လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံရေး အားဖြင့် လည်းကောင်း၊ ဆက်သွယ်မှု ရရန် ကြိုးစားခြင်း စသည်တို့ကို ပြုခဲ့သည်။
တိုင်းသူ ပြည်သားတို့၏ သဘောတွင် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရာ၌ ဘုရင် လက်ဝါးကြီးအုပ်သည့် စနစ်သည် ကာကွယ်မှုကို ပေးထားသည်ဟု ယူဆ ကြလေသည်။ ပြည်တွင်း ရောင်းဝယ်မှုနှင့် ပြည်တွင်း ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးမှာ အခွန်မဲ့ ဖြစ်လေသည်။ အများ ပြည်သူတို့သည် မိမိတို့ နှစ်သက်ရာကို စိုက်ပျိုးနိုင်၍ ပြည်တွင်း ဈေးများတွင် လွတ်လပ်စွာ ရောင်းချနိုင်ခွင့် ရှိသည်။ နယ်စပ် ဒေသများကို ကျော်လွန်၍ အရေးကြီးသော ကုန်ပစ္စည်း တခုကို ရောင်းချလိုလျှင် ဘုရင့် ကိုယ်စားလှယ်မှ တဆင့် ဖြစ်စေ၊ လိုင်စင် ရထားသော ကိုယ်စားလှယ်မှ တဆင့် ဖြစ်စေ၊ ရောင်းချရခြင်း သာလျှင် ချုပ်ချယ်မှု တရပ် ဖြစ်လေသည်။ အောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘုရင် ကိုယ်စားလှယ်တော်များသည် ကုန်တင်သွင်း သူများထံမှ အလုံးအရင်း ချုပ်၍ ဖြစ်စေ၊ မြန်မာ လယ်သမားများ ထံမှ တိုက်ရိုက် ဖြစ်စေ၊ ဈေးသက်သာစွာဖြင့် ဝယ်ယူသည်။ အွေ့ကးပင် ရနိုင်သေးသည်။ မြန်မာ့ ကိုယ်စားလှယ်များသည် ရန်ကုန် ပေါက်ဈေးကို ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း မရှိပါက မဒရပ်နှင့် ကာလကတ္တားမြို့များမှ တိုက်ရိုက် ဝယ်ယူနိုင်ခွင့် ရှိလေသည်။
ခြုံ၍ ကြည့်သော် မင်းတုန်းမင်း၏ စီးပွားရေး စီမံကိန်းသည် အောင်မြင်သည်ဟု ဆိုရာသည်။ အထက် မြန်မာနိုင်ငံ ထွက်ကုန်၊ ဝင်ကုန် ပစ္စည်း တန်ဖိုးမှာ
၁၈၅၈ - ၁၈၅၉ ၃၁.၉ သိန်း ၃၉.၈ သိန်း
၁၈၆၅ - ၁၈၆၆ ၇၂.၅ သိန်း ၈၃.၄ သိန်း
၁၈၇၇ - ၁၈၇၈ ၂ဝဝ.ဝ သိန်း ၁၇၇.၆ သိန်း
မင်းတုန်းမင်း၏ နန်းသက် ကုန်ဆုံးချိန်တွင် မြန်မာ့ ကုန်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး၏ တန်ဖိုးသည် ၅ ဆ တိုးခဲ့၍ အထက် မြန်မာနိုင်ငံသည်လည်း အခြေလှ၍ လာတော့သည်။ မင်းတုန်းမင်း၏ အောင်မြင်မှုကို ဥရောပ တိုက်သားတို့ မရှုစိမ့် ကြတော့ချေ။ အကြောင်းကြောင်းတို့ကို ထောက်၍ အထက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လွတ်လပ်သော ဘုရင် စိုးစံ နေခြင်းသည် မိမိတို့ အတွက် ရနိုင်သမျှသော အမြတ်အစွန်းကို မရစေရန်၊ ဟန့်တား ပိတ်ပင်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ထင်လာကြသည်။
ဥပမာ ဆိုသော် အောက်မြန်မာ နိုင်ငံက ၅ ကျပ်ဈေး ပေး၍ ဝယ်ယူရသော ရေနံချေးကို မြန်မာဘုရင်က ၂ ကျပ်ခွဲ ဈေးဖြင့် ဝယ်ထားကြောင်း သိရသည်။ ၂၅ ကျပ်ဈေးနှင့် ရနိုင်သော ဝါဂွမ်းကို မြန်မာ ဘုရင့်ထံမှ ၃၅ ကျပ် ဈေးနှင့် ဝယ်ယူရသည်။ ခဲမှာ ၇ ကျပ် ဈေးရင်း ရှိသော်လည်း ၁၅ ကျပ် ဈေးနှင့် ဝယ်ရသည်။ မဒရပ်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အနှံ့အပြားတွင် ငတ်မွတ် ခေါင်းပါးခြင်းဘေး ဆိုက်ကပ်သော အခါ ဆန်ကို အမြတ်အစွန်း များစွာနှင့် တင်ပို့နိုင်သည့် အချိန်တွင် ဘုရင့် ကိုယ်စားလှယ်များက ဝယ်ယူပြီး ဖြစ်နှင့်သောကြောင့် မကျေမနပ် စိတ်ဓာတ် ပွားများလာသည့် ကုန်သည်စု နှင့်အတူ ဗြိတိသျှ အစိုးရသည်လည်း မကျေမချမ်း ဖြစ်၍ လာသည်။ အကယ်၍ အထက် မြန်မာနိုင်ငံသာ ဗြိတိသျှတို့ ပိုင်နက် နိုင်ငံ အတွင်း၌ ပါဝင်ခဲ့လျှင် ဗြိတိသျှ ကုန်သည်စု အဖို့ ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး တွင်ကျယ်လာ၍ အမြတ်အစွန်း ပိုမို ရနိုင်မည် ဟူသော အတွေးသည် အလျင်အမြန် ပေါက်ဖွားလာ ခဲ့လေသည်။
မင်းတုန်းမင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေး ဖူလုံရန် ကြိုးစားမှု တခုတည်းကိုသာ ပြုလုပ်ခဲ့သည် မဟုတ်ချေ။ မိမိနှင့် မင်းပြိုင်ဖြစ်သော ယိုးဒယားဘုရင် မဟာမောင်းကွတ် ကဲ့သို့ မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေးကို နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်ပြုရန် လိုအပ်ကြောင်း ကောင်းစွာ သဘောပေါက်ခဲ့သည်။
၁၈၅၅ ခုနှစ်တွင် နန်းမတော် မိဖုရားကြီးနှင့် အပေါင်းသင့်သော မင်းကြီး မဟာမင်းခေါင်ရာဇာအား သံအဖွဲ့ကို ခေါင်းဆောင်စေ၍ ဗြိတိသျှ ဘုရင်ခံချုပ် ရှိရာ ကာလကတ္တားမြို့သို့ စေလွှတ် လိုက်သည်။ သံအဖွဲ့ကို ကာလကတ္တား၌ ကောင်းစွာ ပြုစု ဧည့်ခံသော်လည်း ဒါလဟိုဇီသည် မြန်မာမင်းထံ ပဲခူးကို ပြန်လည် ပေးအပ်ရန် အရေးကို လက်ခံ ဆွေးနွေးခြင်း လုံးဝ မပြုချေ။ နေ အထွက် အဝင် ရှိနေသမျှ ကာလပတ်လုံး ဗြိတိသျှ ပိုင်နက် အတွင်းတွင် ပဲခူးသည် တည်မြဲလျက် ရှိရမည်ဟု မြန်မာသံတို့အား ပြောကြား လိုက်လေသည်။ မြန်မာ သံအဖွဲ့ ပြန်သောအခါ အာသာဖယ်ရာ ခေါင်းဆောင်သော ဗြိတိသျှ သံအဖွဲ့ကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ အပြန်အလှန် စေလွှတ်သည်။ ဗြိတိသျှ သံအဖွဲ့ကို မြန်မာတို့ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ပြုစုကြ၍ ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး စာချုပ်တခု ချုပ်ဆို ဖြစ်ကြလေသည်။ ထိုစာချုပ် အရ ဧရာဝတီမြစ် တလျှောက်လုံးတွင် ဗြိတိသျှ ကုန်သည်တို့အား ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ခွင့် ပေးလေသည်။ အပြန်အလှန် အားဖြင့် နယ်စပ် အကောက်အခွန်များ လျော့ပေါ့ရေးနှင့် အထက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပဲခူးမှ ဆန်တင်ပို့ရေးနှင့် ပတ်သက်သော အင်္ဂလိပ် မြန်မာ နယ်စပ် အခွန် ကောက်ခံရေး တို့ကိုလည်း ထည့်သွင်း ချုပ်ဆိုလေသည်။
၁၈၅၇ ခုနှစ်တွင် ယိုးဒယားနှင့် ချစ်ကြည်စွာ ဆက်ဆံကြောင်း အထိမ်းအမှတ် အဖြစ်ဖြင့် ယိုးဒယား သာသနာပိုင် ဆရာတော်ထံ ဆက်ကပ်ရန် အလှူ ပစ္စည်းနှင့် အဖွဲ့ တဖွဲ့ကို စေလွှတ်လိုက်သည်။ ယိုးဒယား ဘုရင်ကလည်း မြန်မာ သာသနာပိုင်ထံ လှူဖွယ် ပစ္စည်းများကို ပြန်လည် ဆက်ကပ် လိုက်လေသည်။
၁၈၆၂ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှတို့သည် အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ် တဦးကို မြန်မာတို့ နေပြည်တော်၌ နေထိုင်ရန် တကြိမ် ထပ်မံ စေလွှတ်ပြန်သည်။ ယခု တကြိမ်တွင် နေပြည်တော်မှ မန္ဈလေးမြို့ ဖြစ်သည်။ ၁၈၅၇ ခုနှစ်၌ မင်းတုန်းမင်းသည် မန္ဈလေးသို့ ရွှေ့ပြောင်း နန်းစံခဲ့သည်။ ဖယ်ယာ၏ ရာထူးကို ဆက်ခံသော ဖိုက်ခ်ျနှင့် မြန်မာ အစိုးရတို့သည် ၁၈၆၇ ခုနှစ်တွင် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး စာချုပ်သစ် တရပ်ကို ချုပ်ဆို ပြန်လေသည်။ စာချုပ် အနေအားဖြင့် အရေးမကြီးလှ သော်လည်း စာချုပ်ပါ အချက်များကို ထောက်ထားခြင်းဖြင့် ဗြိတိသျှတို့၏ တင်းမာလာသော သဘောထားကို ထင်ရှားစွာ သိမြင်ရသည်။ ဗန်းမော်မှ တဆင့် တရုတ် နိုင်ငံနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်လိုသည့် ဆန္ဒမှ ဗြိတိသျှတို့တွင် တနေ့တခြား စွဲလန်း လာခဲ့ရာ၊ ဗြိတိသျှတို့သည် တရုတ်နှင့် ကူးသန်းရေး ဖြစ်ထွန်းစေမှုကို ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် ဗန်းမော်တွင် ဗြိတိသျှ နိုင်ငံရေး ကိုယ်စားလှယ် တဦး ထားရန် စာချုပ်တွင် ထည့်သွင်း ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပင်လယ် ကမ်းရိုးတန်း တလျှောက်တွင် အခြား ဥရောပ နိုင်ငံကြီးများ အပြိုင်အဆိုင် ကုန်ကူးသန်းလျက် ရှိခြင်းကြောင့် ဗြိတိသျှတို့သည် ဤသို့သော ဆန္ဒ ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်လေသည်။ ဖိုက်ခ်ျနှင့် ချုပ်ဆိုသော စာချုပ်အရ၊ မြန်မာတို့သည် ဗြိတိသျှ မြန်မာနိုင်ငံ မဟာဝန်ရှင်တော် မင်းကြီး၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လက်နက် ခဲယမ်းများကို သွင်းခွင့် ရရှိရာ၊ ၎င်း စာချုပ်နှင့် အတူ ပူးတွဲပါသည့် အချက်တွင် ဝန်ရှင်တော် မင်းကြီးကလည်း ယေဘူယျ အားဖြင့် တင်သွင်းခွင့်ကို ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံချက် ပါလေသည်။ သို့သော် လက်တွေ့အားဖြင့် လက်နက်များ တင်သွင်းရန် လျှောက်လွှာ တင်သော အခါ ဗြိတိသျှတို့သည် ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပင် ကတိ ဖောက်ဖျက်ကာ ငြင်းပယ် လိုက်လေသည်။
အိန္ဒိယရှိ ဗြိတိသျှ အာဏာပိုင်များနှင့် ဆက်သွယ်မှုမှာ ကျေနပ်ဖွယ် မရှိသဖြင့်၊ အင်္ဂလန် နိုင်ငံရှိ ဗြိတိသျှ အစိုးရနှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်ဆံခြင်း ပြုလျှင် ပိုမို သင့်လျော်မည်ဟု ယူဆကာ မင်းတုန်းမင်းသည် အင်္ဂလန်သို့ သံအဖွဲ့ တဖွဲ့ စေလွှတ်လေသည်။ ၁၈၇ဝ ပြည့်နှစ်တွင် ကင်းဝန်ထောက်မင်းကြီး မဟာစည်သူကို အဂ္ဂမဟာ သေနာပတိ ဝန်ကြီး သုံးပါးတွင် တပါး အပါအဝင် အဖြစ် ချီးမြှင့်ပြီးလျှင် သံအဖွဲ့ကို ခေါင်းဆောင်စေ၍ ဥရောပ နိုင်ငံများသို့ စေလွှတ်လေသည်။
သံအဖွဲ့၏ ခရီးစဉ်ကို မှတ်တမ်းတင်သည့် "ကင်းဝန်မင်းကြီး မှတ်တမ်း" သည် မြန်မာ စာပေ သမိုင်းဝင် စာပေ ဖြစ်လေသည်။ ထို မှတ်တမ်းကို ထောက်၍ ကင်းဝန်မင်းကြီးသည် ဥရောပ နိုင်ငံကြီးများ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် စက်မှုလက်မှု မည်မျှ ကြီးမားပုံကို စေ့ငှစွာ သတိမူ ဂရုပြုတတ်သည့် အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံရုံမျှမက၊ အဆင့်အတန်း မြင့်သော နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင် အရည်အချင်း ရှိသူ ဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားလေသည်။ မြန်မာတို့သည် နိုင်ငံတကာနှင့် သင့်မြတ်စွာ ဆက်ဆံရေးကို လိုလားကာ နိုင်ငံတကာ၏ အသိအမှတ် ပြုရေးကို မွတ်သိပ်စွာ လိုလားလျက် ရှိကြောင်းကိုလည်း သိနိုင်လေသည်။ ထို့ပြင် နယ်ချဲ့ နိုင်ငံကြီးများ၏ စစ်အင်အားကို အမီလိုက်ရမည့် ဤ ခေတ်အခါတွင် မိမိတို့ နိုင်ငံတခုလည်း အထီးတည်း ရပ်တည်နေပါက အန္ဈရာယ် များလှသည်ကို သဘောပေါက် ကြကြောင်းကိုလည်း သိရလေသည်။
သံအဖွဲ့သည် လမ်းခရီးတွင် ရပ်တန့်သည့် အခါတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံသည် လွတ်လပ်သော နိုင်ငံ အဖြစ် ရပ်တည်နေကြောင်း ထင်ရှားစေရန် ကြိုးစား ခဲ့လေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အဆက်အသွယ် ပြုရန်လည်း စကား ကမ်းလှမ်းသည်။ သို့သော် ထိုအချိန် အခါက ကမ္ဘာတွင် အင်အား အကြီးဆုံး ဖြစ်နေသော ဗြိတိသျှ နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်ရန် လျာထားသည်ကို သိပြီး ဖြစ်နေကြ သောကြောင့် အခြား ဥရောပ နိုင်ငံများသည် မြန်မာတို့နှင့် ဆက်သွယ်ရန် နှောင့်နှေးလျက် ရှိကြသည်။
အင်္ဂလန်သို့ ရောက်ရှိခြင်းဖြင့် မြန်မာတို့ မျက်စိ ပွင့်ခဲ့ကြလေသည်။ အင်္ဂလန်ပြည့်ရှင် ဘုရင်သည် ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အကြံဉာဏ် ပေးချက်များကို ငြင်းဆိုနိုင်ခြင်း မရှိသည်ကို သိမြင် လာကြသည်။ ဥပဒေဖြင့် အုပ်ချုပ်ရသော အင်္ဂလန် ပြည့်ရှင် ဘုရင်မကြီးသည် မှူးမတ်ကြီးများ၏ အကြံပေး လျှောက်ထားချက် အရ မြန်မာ သံအဖွဲ့ကို ပြေပြစ် ကြည်သာစွာ လက်ခံ ခဲ့သော်လည်း မိမိ၏ အင်ပါယာကို ချဲ့ထွင် နေသည့် ဗြိတိသျှ အမှုထမ်းတို့က မြန်မာနိုင်ငံအား ခြိမ်းခြောက် နေမှုကိုမူ သက်သာ လျော့ပါးစေရန် စွမ်းဆောင်ခြင်း မပြုနိုင်ကြောင်းကို မြန်မာ သံအဖွဲ့က တွေ့ကြုံ ခဲ့လေသည်။
ဗြိတိသျှတို့သည် မြင်ကွန်း၊ မြင်းခုံတိုင်၊ မင်းသား နှစ်ပါး၏ ထီးနန်း လုပ်ကြံမှုကို အချက်ကောင်း ယူ၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဝင်ရောက် စွက်ဖက်မည့် အန္ဈရာယ်ကလည်း ရှိလေသည်။ မင်းသား နှစ်ပါးတို့သည် ၁၈၆၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် ပုန်ကန်ကြရာ အောင်မြင်ခြင်း မရှိသည့် အတွက် ဗြိတိသျှ ပိုင်နက် အတွင်းသို့ ထွက်ပြေး ခိုလှုံလေသည်။ ဗြိတိသျှ ပိုင်နက်တွင် အကျယ်ချုပ် သဘောဖြင့် သက်ရောက်နေရာ ၁၈၆၇ ခုနှစ်တွင် အကျယ်ချုပ်မှ ထွက်ပြေး၍ ထီးနန်းကို တကြိမ် လုပ်ကြံကြ ပြန်သည်။ ၁၈၈၁ ခုနှစ်နှင့် ၁၈၈၂ ခုနှစ်များတွင် ပုန်ကန်မှု ထပ်မံ ပေါ်ပေါက်ပြန်၍ မင်းသား နှစ်ပါး၏ နောက်လိုက်များမှာ အသုတ်လိုက် ကွပ်မျက်ခြင်း ခံရလေသည်။ ဤတွင် ဗြိတိသျှတို့သည် ရိုင်းစိုင်း ရက်စက်လှသည့် အထက်မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရကို ဖြုတ်ချ၍ ဗြိတိသျှ အုပ်ချုပ်ရေး၌ သွတ်သွင်းရန် သင့်သည်ဟုွွေ့ကးကြော် အရေးဆို ကြတော့သည်။
ဗြိတိသျှတို့နှင့် သင့်တင့်ရန် ကြိုးစားမှုတွင် မင်းတုန်းမင်း ကဲ့သို့ မည်သည့် မြန်မာမင်းကမျှ မပြုခဲ့ဘူးချေ။ သို့သော် ထိုသို့ ကြိုးစားရာ၌ မြန်မာ ဘုရင်တို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် အသရေကို ထိခိုက်စေမည့် အမှုမျိုးကိုကား မင်းတုန်းမင်းသည် ရှောင်ရှား ခဲ့လေသည်။
၁၈၇၅ ခုနှစ်တွင် မန္ဈလေးသို့ ရောက်နေသော ဗြိတိသျှ သံအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဖော်ဆိတ်သည် နန်းတွင်းသို့ ဖိနပ်စီး၍ မဝင်ရသော နန်းတွင်း အစဉ်အလာကို ကန့်ကွက်ခြင်း ပြုလေသည်။ အိန္ဒိယရှိ ဗြိတိသျှ ဘုရင်ခံချုပ် အသစ်ကလည်း ဗြိတိသျှ ကိုယ်စားလှယ်များ မြန်မာ နန်းတော်တွင်းသို့ ဝင်ရောက်သော အခါ ဖိနပ်ခ္ဆွတ်ရသည့် အစဉ်အလာကို ရပ်တန့်သင့်ပြီဟု အရေးဆိုသည်။ ထိုနေ့မှ စ၍ မင်းတုန်းမင်းသည် ဗြိတိသျှ ကိုယ်စားလှယ်ကို ဖူးမျှော်ခွင့် မပေးတော့ချေ။
နိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေး တည်တံ့ရန် ကြိုးပမ်းခြင်း။
မင်းတုန်းမင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးအား ထိပါးလာသည့် အန္ဈရာယ်များကို ဖယ်ရှား၍ လွတ်လပ်ရေး တည်တံ့ရန် ခေါင်းဆောင် ကြိုးပမ်းလေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် အချုပ်အချာ လွတ်လပ်သော နိုင်ငံ ဖြစ်ကြောင်းကို ကမ္ဘာက သိအောင် အားထုတ်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ပြည်ထောင် အချင်းချင်း အဆက်အသွယ် အကူးအသန်း ခက်ခဲမှုကြောင့် လည်းကောင်း၊ ဗြိတိသျှတို့၏ တန်ခိုးအာဏာက ဟန့်ထား သကဲ့သို့ ရှိသောကြောင့် လည်းကောင်း၊ မင်းတုန်းမင်း၏ အားထုတ်မှု အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်ခဲ့ချေ။ ပြည်ထောင် အချင်းချင်း အကူးအသန်း အခက်အခဲ ဝေးလံခြင်းကြောင့် မင်းတုန်းမင်း၏ အားထုတ်မှု အချည်းနှီး ဖြစ်ရခြင်းကို အမေရိကန်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးတွင် တွေ့မြင်ရသည်။ အမေရိကန် သမတ ဘူကန္နန်သည် ဂျပန်အား အမေရိကန် ရေတပ်မှူး ပယ်ရီက လက်ဆောင် အဖြစ်ပေးသည့် ရေနွေးငွေ့ဖြင့် မောင်းသော သင်္ဘောမျိုးကို မြန်မာဘုရင် ထံသို့လည်း ပေးသင့်ကြောင်း အမေရိကန် သာသနာပြု ကင်းကိတ်၏ အကြံပေးချက်ကို လက်ခံလေသည်။ သို့သော် မင်းတုန်းမင်းက အမေရိကန် နိုင်ငံသို့ မြန်မာ လူငယ် ၁၂ ဦးခန့် စေလွှတ်လိုသည့် ဆန္ဒကိုမူ တိုင်းပြည်ချင်း ဝေးကွာလွန်းမှု ရှိနေသောကြောင့် ဂရုတစိုက် လိုက်လျော ဖြည့်စွက်ခြင်း မပြုခဲ့ချေ။
မင်းတုန်းမင်း၏ အားထုတ်မှုများသည် အချည်းနှီး ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းကို မြန်မာတို့ စေလွှတ်သည့် ကင်းဝန်မင်းကြီး သံအဖွဲ့ အင်္ဂလန် ဆိုက်ရောက်လာစဉ်က စိန့်ဂျိမ်း နန်းတော်၌ ကြိုဆို ဂုဏ်ပြုပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သော အမေရိကန် သံအမတ်၏ ဝေဖန်ချက်တွင် တွေ့မြင်နိုင်သည်။ "ဤ နန်းတော်သို့ သံတမန်တို့၏ အဆောင်အယောင်ဖြင့် ရောက်လာသော်လည်း ဘုရင်မကြီး ရှေ့မှောက်သို့ သွင်း၍ သဝဏ်လွှာများကို ဆက်သသော အခါ ဗြိတိသျှ နိုင်ငံခြားရေးရာ ဝန်ကြီးက ဖေးမ ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုဘဲ အိန္ဒိယ ပြည်နယ် ဆိုင်ရာ အတွင်းဝန်နှင့် တွဲဖက်၍ အခစား ဝင်ကြရသည်။ ဤအချက်တွင် ထူးခြားသည့် အဓိပ္ပါယ် ပါရှိသည်။ အဓိပ္ပါယ်ကား ဗြိတိသျှ အစိုးရသည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆက်ဆံရာ၌ ဂရိတ် ဗြိတိန်၏ အရှေ့တလွှား ပိုင်နက်များ ပေါ်တွင် ထားသော ဝါဒ အရသာလျှင် ဆက်ဆံလို၍ လွတ်လပ်သော နိုင်ငံ တနိုင်ငံ အပေါ်တွင် ထားသော သဘောမျိုး မဟုတ်" ဟု ဝေဖန် ထားလေသည်။
ဗြိတိသျှတို့သည် အထက် မြန်မာနိုင်ငံကို ဗြိတိသျှ အိန္ဒိယ အင်ပါယာ အတွင်းသို့ တနေ့နေ့၌ သိမ်းသွင်းရန် ဝါဒ ချမှတ်ပြီး ဖြစ်၍ အကြောင်းပြ ကောင်းမည့် အချက်နှင့် အခွင့်အခါကိုသာ စောင့်ဆိုင်း နေသည်မှာ ထင်ရှားလှသည်။ ထို့ကြောင့် ၁၈၇၃ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ သံအဖွဲ့သည် အီတလီနှင့် ပြင်သစ် အစိုးရတို့နှင့် သင့်မြတ်ရေး အတွက် လည်းကောင်း၊ ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး အတွက် လည်းကောင်း၊ စာချုပ်များကို ချုပ်ဆို နိုင်ခဲ့သော်လည်း ဗြိတိသျှတို့၏ ခြိမ်းခြောက်မှုနှင့် ကျူးလွန်မှုများကို ဟန့်တားနိုင်ခြင်း မရှိသည့် အပြင် ဗြိတိသျှတို့၏ ဝန်တို မိစ္စာ စိတ်ထားကိုပင် နှိုးဆွ ပေးသကဲ့သို့ ဖြစ်ကာ နောက်ဆုံး ခြေလှမ်းကို အမြန် လှမ်းစေ သကဲ့သို့ ဖြစ်ခဲ့လေသည်။
မြန်မာမင်းနှင့် ဗြိတိသျှတို့ နှစ်ဦး နှစ်ဖက်စလုံးသည် ဖိနပ် ပြဿနာဟု ခေါ်သော အရေးတွင် အလျှော့ မပေးကြ သဖြင့် ဗြိတိသျှ အစိုးရနှင့် မြန်မာ ဘုရင်တို့သည် ဆက်သွယ်မှု ပြတ်စဲခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှတို့သည် ဒုက္ခ ပေးတော့မည်မှာ ထင်ရှားလှသည်။ သို့သော် မင်းတုန်းမင်းသည် မြန်မာမင်းတို့ အစဉ်အလာ ကျင့်ဝတ် အတိုင်း သာသနာ့ ဒါယကာ ဟူသော ဘွဲ့နှင့်အညီ မြန်မာမှု မြန်မာကိစ္စ တို့ကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မြဲ ဆောင်ရွက် ခဲ့လေသည်။
မင်းတုန်းမင်း နန်းတက်သော အခါ ဆရာတော်များနှင့် မှူးမတ် ပညာရှိတို့ကို ပင့်ဖိတ်ပြီးလျှင် မင်း နေပြည်တော်ကို မန္ဈလေးသို့ လျှောက်ထားရန် သင့် မသင့် လျှောက်ထားသည်။ အများက သဘော တူညီကြ သဖြင့် မန္ဈလေးမြို့ကို တည်ဆောက်ကြသည်။ ထူထဲသော မြို့ရိုးကြီးများ ကာရံလျက် နန်းတွင်းသူ နန်းတွင်းသားတို့ နေထိုင်ရန် ရွှေရောင်ဝင်းသည့် ဘုံခုနှစ်ဆင့် ပြဿဒ် တင်၍ နန်းတော်ကို တည်ဆောက် လေသည်။ မန္ဈလေး နန်းတော်သည် မြန်မာ အမျိုးသားတို့၏ ဇာတိမာန် တက်ွ့ကရာ အာရုံ စူးစိုက်ရာ အဖြစ် တည်ရှိခဲ့သည်။ မန္ဈလေးကို တည်ဆောက်ပြီးနောက် နိုင်ငံရေး ကိစ္စနှင့် စီးပွားရေး ကိစ္စ မြားမြောင် နေသည့် ကြားမှပင် မင်းတုန်းမင်းသည် ဆည်မြောင်း ကန်ချောင်းတို့ကို ပြုပြင်သည်။ ဘုရား ပုထိုးများကိုလည်း လှည့်လည် ဖူးမျှော်၍ စေတီ တည်ခြင်း၊ မွမ်းမံခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်သည်။
ပုန်ကန် ထွ့ကလိုသော စော်ဘွားများ ကျေနပ်စေရန် စော်ဘွားတို့၏ သမီးတော်၊ နှစ်မတော်တို့နှင့် လက်ဆက်ခြင်း ပြုလေသည်။ ပညာကျော် ဝါရင့် ဆရာတော်ကြီးများအား ဘွဲ့တံဆိပ်များ ကပ်လှူ၍ ပထမပြန် စာမေးပွဲများ ပြုလုပ်ပေးသည်။ ပဉ္စမ သင်္ဂါယနာကိုလည်း တင်ခဲ့သည်။ သင်္ဃာတော် အပါး နှစ်ထောင်ကျော်ကို နေပြည်တော်တွင် သီးတင်း သုံးစေ၍ ပိဋကတ်တော်များကို စီစစ် ရေးသား ပြုစု နေဆဲတွင် နေ့စဉ် မပြတ် ဆွမ်းကွမ်း လှူးဒါန်းသည်မှာ လပေါင်းများစွာ ကြာခဲ့လေသည်။ တည်းဖြတ်ပြီးသော ပိဋကတ်တော်များကို သင်္ဂါယနာတင် အထိမ်းအမှတ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ သာသနာ ငါးထောင် တည်ရန်ဟု ရည်စူး၍ လည်းကောင်း၊ ကျောက်ထက် အက္ခရာ တင်စေသည်။ မင်းတုန်းမင်းသည် ရန်ကုန်သို့ စေလွှတ်၍ ရွှေတိဂုံ စေတီတော်တွင် ယနေ့တိုင် ဖူးမျှော် နေရသည့် ရတနာ အမျက်ဖြင့် ချယ်လှယ်ထားသော ထီးတော်ကို တင်စေရာ၊ ဗြိတိသျှတို့က ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ မင်းတုန်းမင်း လွန်စွာ ဂုဏ်ယူ မြတ်နိုး သော ဘွဲ့မည်ကား ပဉ္စမ သင်္ဂါယနာတင် မင်းတရားကြီး ဟူသော ဘွဲ့ ဖြစ်လေသည်။
နန်းလျာ ခန့်အပ်ရေး ပြဿနာ။
မြန်မာမင်းတို့ အစဉ်အလာ ပြုနေကျ ဖြစ်သည့် အတိုင်း နိုင်ငံရေး အားဖြင့် တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုတို့နှင့် စည်းလုံးရေး အတွက် မင်းတို့၌ မိဖုရား မြောက်များစွာ ထားခဲ့ရာ၊ မဟာသွေး မဟာနွယ်တို့ များစွာ ပေါက်ဖွားခဲ့သည်။ သို့သော် သားတော်များစွာ ထွန်းကားခဲ့သည့် အတွက် ပြဿနာ တရပ် ပေါ်ထွက် လာရသည်။ ညီတော် နန်းလျာ အိမ်ရှေ့ ဥပရာဇာ ကနောင်မင်းသားကို သားတော် မြင်းခုံတိုင် မင်းသားက လုပ်ကြံပြီး သည့်နောက် နန်းလျာ ခန့်အပ်ရေးမှာ ပြဿနာ ဖြစ်၍ နေလေသည်။
မင်းတုန်းမင်းသည် သားတော်ကြီး တပါးပါးကို အတိအလင်း နန်းလျာအဖြစ် ကျေညာပါက ထိုနန်းလျာ သားတော်၏ အသက်ဘေးသည် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ဖြစ်မည်ကို သိဟန် တူသည်။ သားတော် အများအပြားတွင် မင်းတုန်းမင်းကို သစ္စာ စောင့်သိ၍ အရည်အချင်း ပြည့်သော သားတော်ကြီးများ ရှိသည်။ နိုင်ငံတော် စက်ရုံများကို ကြည့်ကြပ်ရသော မက္ခရာ မင်းသားသည်၊ သို့မဟုတ် ညောင်ရမ်းမင်းသည်၊ အရည်အချင်း ပြည့်သော မင်းသား ဖြစ်လေသည်။ သို့ရာတွင် မင်းတုန်းမင်းသည် ကံကုန်မည့် နေ့တိုင်အောင် မည်သည့် သားတော်ကိုမျှ ရွေးချယ်လိုကြောင်း မပြခဲ့ချေ။
သီပေါမင်းသားကို နန်းတင်ရန် ကြံစည်ကြခြင်း။
နန်းလျာ ခန့်အပ်ရေး ပြဿနာကို မင်းတုန်းမင်း နတ်ရွာ စံခါနီးတွင် မင်းတုန်းမင်း၏ အလယ် နန်းမတော် မိဖုရားနှင့် ကင်းဝန် မင်းကြီးတို့က အဆုံးအဖြတ် ပေးလိုက်လေသည်။ ၎င်းတို့ ရွေးချယ်သော နန်းလျာသည် မိဖုရားငယ် တပါး၏ ဝါနုသေးသော သားတော် သီပေါမင်းသား ဖြစ်သည်။ သီပေါ မင်းသားသည် မိဖုရားကြီး၏ သမီးငယ် စုဖုရားလတ်နှင့် ချစ်ခင် ရည်ငံလျက် ရှိသဖြင့် မိဖုရားကြီးက သမီးတော်၏ ချစ်သူ နန်းတက်လျှင် သမီးတော်သည် မိဖုရားခေါင်ကြီး ဖြစ်၍ မိမိလည်း သြဇာ လွှမ်းမိုး ချယ်လှယ် နိုင်မည်ဟု ရည်ရွယ်သည်။
ကင်းဝန်မင်းကြီးမူကား ဥရောပတိုက်မှ ပြန်ရောက် လာပြီးသည့်နောက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စည်းမျဉ်း ဥပဒေအရ အုပ်ချုပ်သော ဘုရင် စနစ်ကို တည်ထောင်ရန် လိုလားခဲ့သည်။ ကင်းဝန် မင်းကြီးသည် ဤ မျှော်လင့်ချက်ကို မင်းတုန်းမင်း သက်တော် ထင်ရှား ရှိစဉ်က လျှောက်တင်ရန် ကြိုးစားခဲ့ရာ မင်းတုန်းမင်းကြီးက ကင်းဝန်မင်းကြီး လျှောက်တင်ပြချက်ကို အလိုမကျ မျက်မာန် ရှခဲ့ဟန် တူသည်။ ကင်းဝန်မင်းကြီးကို "ပြည့်ရှင် ဘုရင်အား လခစား အဖြစ် ခိုင်းစေ လိုသလော" ဟု မိန့်တော်မူ ခဲ့သည်။ ယခုတမူ မင်းတုန်းမင်းသည် သေငယ်ဇောနှင့် မျော၍ နေချေပြီ။ အင်အား ပြည့်စုံ၍ စိတ်ဓာတ် ရင့်သန်သော ဘုရင်သည် မိမိ၏ အကြံအစည် လိုလားချက်ကို လက်ခံမည် မဟုတ်ဟု ကင်းဝန်မင်းကြီး သိနားလည် လေသည်။ ထို့ကြောင့် ကင်းဝန်မင်းကြီးသည် သီပေါမင်းသားကို နန်းတင်ရန် အလယ် နန်းမတော် မိဖုရားနှင့် တကြိတ် တဉာဏ်တည်း အကြံအစည် ပြုကြလေသည်။ ဗြိတိသျှ ကိုယ်စားလှယ်တော်၏ အစီရင်ခံစာတွင် သီပေါမင်းသားကို စည်းမျဉ်း ဥပဒေ အရ စိုးစံသော မင်း အဖြစ်ဖြင့် မြန်မာ နန်းပလ္လင်တွင် တင်မြှောက်မည် ဟူသော ကတိကြောင့် ကင်းဝန်မင်းကြီး၏ ထောက်ခံချက်ကို ရဟန်တူသည်ဟု ရေးသားထားသည်။
အစဉ်အလာ ရှိသည်မှာ မှူးကြီး မတ်ကြီးများသည် မည်သည့် မင်းသားကို နန်းလျာ တင်လိုကြောင်း ရွေးချယ်စေသည်။ မှူးမတ် အပေါင်းတို့ စုရုံး၍ မင်းသားတို့ အမည် စာရင်းကို ကြည့်ရှုနေဆဲ ကင်းဝန်မင်းကြီးသည် နန်းရင်ပြင်သို့ ထွက်လာကာ သီပေါမင်းသား၏ အမည်ဘေးတွင် ကြက်ခြေ ခတ်လိုက်လေသည်။ ချက်ခြင်းပင် သီပေါမင်းသားကို နန်းတင်ရန် သဘောတူကြောင်း မှူးကြီး မတ်ကြီးတို့က တင်လျှောက် ကြလေသည်။ ထို့နောက် အခြား မင်းသားများကို ခမည်းတော်အား နောက်ဆုံး အကြိမ် ဖူးမျှော်ရန် မင်းမိန့်ဖြင့် ဆင့်ခေါ် လေသည်။ ရောက်လာသော မင်းသား အားလုံးကို အလယ် နန်းမတော်၏ အမိန့်ဖြင့် ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်ခြင်း ပြုလေသည်။ ကင်းဝန်မင်းကြီးက ခတ်မဆိတ်နေ၍ လစ်လျူ ရှုခဲ့သည်။ ၁၈၇၈ ခုနှစ်တွင် မင်းတုန်းမင်းတရားကြီး နတ်ရွာ စံလွန်သော အခါ မင်းညီ မင်းသားပေါင်း များစွာ ပျက်စီးကြသည်။ အချို့လည်း နိုင်ငံခြားသို့ ထွက်ပြေးကြသည်။ အချို့လည်း ထောင်သွင်း အကျဉ်းချ ထားခြင်း ခံကြရသည်။ ထိုကြောင့် သီပေါမင်းသည် မြန်မာ့ နန်းပလ္လင်တွင် ပြိုင်ဘက်မရှိ စိုးစံ ရလေတော့သည်။
မြန်မာ့ သတင်းဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာအဖွဲ့/နည်းပညာနှင့် မြန်မာ့ ကွန်ရက် မော်ကွန်းတိုက်/ စာပေ၊ သတင်းနည်းပညာနှင့် လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းသော နိုင်ငံတော်
Was Ivanhoe's Burmese mine sold to China? Sale possible violation of sanctions
Ottawa − The Canadian Friends of Burma (CFOB) has learned that documents filed with the US Securities and Exchange Commission (SEC) in December 2007 by China Resources Ltd. state that the firm's CFO Gerald Nugawela,aformer Ivanhoe Mines employee, was “instrumental in arranging the sale” of Myanmar Ivanhoe Copper Co. Ltd (MICCL) to the China-based Chinese Aluminum Company. MICCL was the joint 50/50 joint venture between Robert Friedland's Ivanhoe Mines and the Burmese military regime. China Resources SEC filings sharply contradict Ivanhoe's public statements about MICCL.
In February 2007, Ivanhoe Mines announced that it had “sold” its 50% stake in MICCL operator of Burma's largest mine to an “independent third party trust” in return foraguarantee that when the trust sells the stake Ivanhoe will then be paid. Later that year Ivanhoe, citingalack of knowledge about what was occurring at MICCL's Monywa copper mine, claimed that it was “prudent to recorda$134.3 million write-down” in the value of their 50% holding in the Burmese joint venture thus reducing its value to zero.
Just days before President Bush left office in January the US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) added MICCL to the US government's Burma sanctions list. Ivanhoe has so far declined to comment on this major development, preferring to leave shareholders in the dark about it.
Question about MICCL proceeds and sanctions
If MICCL was indeed sold inadeal arranged by Mr Nugawela, it raises several troubling questions about Ivanhoe's $134.3 million write down in the value of its stake in MICCL. Did Ivanhoe in fact receive any funds for its 50% stake in MICCL? If Ivanhoe didn't receive funds then who did? Was this back door deal arranged in order to skirt American and Canadian trade sanctions with Burma?
The fact that Nugawela arranged the deal also raises serious concerns about the credibility of the so-called “blind trust”. The China Resources LTD filings state that from“2005 to January 2007, Mr. Nugawela was employed by Ivanhoe Mines as Commercial Manager of Myanmar Ivanhoe Copper Co. Ltd.” This and other details about MICCL were again included in four subsequent China Resources LTD filings with the SEC. If Mr. Nugawela was indeed “instrumental” in the sale of MICCL as the SEC filings state, he almost certainly wasamember of the “blind trust”. The possibility that the “blind trust” contained an individual who only one month before its creation was working for Ivanhoe may explain why Ivanhoe flatly refused to disclose who part of the “blind trust” was.
CFOB Executive Director Tin Maung Htoo is deeply troubled by Ivanhoe's unwillingness to disclose details regarding the firm’s Burmese ties. According to Tin Maung Htoo “for more than2years Ivanhoe was hiding behind this so called 'blind trust' and now we have strong evidence that this was justafacade. Ivanhoe must be forced to disclose everything.”
In October 2006 the UK-Australian mining giant Rio Tinto boughta9.95% stake in Ivanhoe Mines. Ivanhoe's “blind trust” was something Rio Tinto heralded at its AGM inadesperate attempt to deflect criticism. The Ivanhoe-Rio Tinto deal enabled the two infamous firms to join forces to developamassive copper and gold project in Mongolia, where unhappy locals have already burned Ivanhoe's controversial chairman Robert Friedland in effigy.
CFOB Urges Pension Plans to wake up about Ivanhoe
CFOB board member Kevin McLeod is deeply frustrated that Ivanhoe's major shareholders haven't been more diligent in following up on Ivanhoe's Burmese shell game. McLeod adds “for several years we have been urging the big pension plans to use their large holdings in Ivanhoe to force the firm to come clean on its activities in Burma. The CPP and the Caisse de don't seem to be very interested in getting to the bottom of this fiasco, Ivanhoe's AGM is coming up in May and so far we have seen no indication from either pension plans that they are prepared to hold Ivanhoe's feet to the fire.” The latest figures show that the CPP hasa1% stake in Ivanhoe while Quebec's equivalent the Caisse de dépôt hasamassive 8% stake.
Quebcois furious over Caisse's massive investment in Ivanhoe
Many Quebecers that CFOB is in contact with are incensed to learn that the Caisse ownsamassive 8% chunk in the notorious mining firm. It should be noted that that the Caisse lost nearly C$20 million when it invested heavily in Friedland's disastrous mining firm Galactic Resources in the late 1980's (“Caisse loses $20 million” The Gazette. Oct 6, 1993). Friedland personally paidarecord US 27.5 million dollar fine to the US government for his role in Galactic's toxic Summitville mine which killed all aquatic life inanearby river for at least 17 miles. US taxpayers have spent more than $200 million to clean up the Colorado mine called by many the costliest environmental mining disaster in US history.
စာပေစီစစ်ရေး ၏ တရားနည်းလမ်းမကျ ဆုံးဖြတ်မှု ကြောင့် မီဒီယာများ စာပေအပြင် ကြော်ငြာ ပါ ပိတ်ပင်ခံရ။ကမ္ဘာ့သြဇာကြီးသူ ၁၀၀ တွင် ဒေါ်စု ထိပ်ပိုင်းမှ ပါဝင် ။စာရေးဆရာ မောင်သာရ ဆေးရုံတွင် နှလုံးအကူစက် ခွဲစိတ်တပ်ဆင်ရ။
`ကွန်ဖစ်ကာ´ ကဘာတွေဖြစ်နိုင်သလဲ။၂၀၁၀ မှာ ရိုဟင်ဂျာ(သို့) ဘင်္ဂါလီတွေ မဲပေးခွင့်ရှိမှာလား။မြန်မာ့ ဒုက္ခသည်မိသားစုတစု ဒက္ကားမြို့ UNHCR ရုံးတွင် ဆန္ဒပြ ။မယက ဘောလုံးပွဲအတွက် ရွာသားများ ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးရ။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာ အားလုံးအတွက် စစ်အစိုးရ လူရွေးပြီးပြီ။
အင်တာနက် သူလျှိုလုပ်မှု တရုတ်နိုင်ငံ စွပ်စွဲခံရ
နိုင်ငံပေါင်း ၁ဝဝ ကျော်က အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ကွန်ပျူတာတွေကို အင်တာနက် ကွန်ရက်က တဆင့် ထိုးဖောက် ဝင်ရောက် ထောက်လှမ်းမှုတွေ လုပ်ခဲ့တာဟာ တရုတ်နိုင်ငံက ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ ခြေရာကောက် စုံစမ်းမှုတွေ ပေါ်ထွက်လာ ပြီးနောက် အဲဒီအပေါ် အဝေးရောက် တိဘက်အစိုးရက စိုးရိမ်ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။ တိဗက် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင် ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်း လားမား (Dalai Lama) ရဲ့ ရုံးမှာသုံးတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေထဲက သတင်း အချက်အလက်တွေကို တရုတ် အစိုးရ ရနေပုံရတယ်လို့ အဝေးရောက် တိဘက် အစိုးရက ပြောလိုက်တာပါ။
တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ အင်တာနက် သူလျှိုလုပ်မှု။
ဗွီအိုအေ ၊ ၃ဝ ၊ မတ် ၊ ၂ဝဝ၉
အိန္ဒိယ အခြေစိုက် ပြည်ပရောက် တိဘက် လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့တွေရဲ့ ကွန်ပျူတာတွေမှာ ကြုံတွေ့ နေရတဲ့ ပြဿနာတွေကြောင့် အရမ်းကို ကျယ်ပြန့်တဲ့ အင်တာနက် သူလျှို လုပ်ငန်းတွေကို ဖော်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ အင်တာနက် လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ လေ့လာ သုံးသပ်သူတွေက ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။ ဒီ အင်တာနက် သူလျှိုလုပ်ငန်း အရင်းခံ ဇစ်မြစ်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံက ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုနေကြပါတယ်။
Ghost Net လို့ ခေါ်တဲ့ အင်တာနက် သူလျှို ကွန်ရက်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ အစိုးရတွေ၊ သံရုံးတွေ၊ နေတိုးအဖွဲ့၊ သတင်း မီဒီယာ တချို့နဲ့ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေက ပိုင်တဲ့ ကွန်ပျူတာ ၁,ဝဝဝ ကျော်ကို ဝင်ပြီး သတင်း အချက်အလက်တွေ ယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဗြိတိန်၊ အမေရိကန်နဲ့ ကနေဒါနိုင်ငံတွေက ပညာရေး အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ သုတေသန လုပ်သူတွေက ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။
အင်တာနက်ကနေ အခုလိုမျိုး သူလျှို လုပ်ပြီး သတင်းတွေ ယူနေတာကို ပထမဆုံး အကြိမ် တွေ့တာကတော့ တိဘက် ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်းလားမား နေထိုင်တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းက ဒါရမ်ဆလာ တောင်ပေါ်မြို့လေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်ပရောက် တိဘက် အစိုးရရဲ့ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ သပ်ဘ်တန် ဆမ်ဖဲလ် (Thubten Samphel) က အခုလို ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
"ကျနော်တို့ရဲ့ ကွန်ပျူတာတွေထဲမှာ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ထည့်ထား ခံရတာကို ကျနော်တို့ ရင်ဆိုင် နေရပါတယ်။ ကျနော်တို့ ကွန်ပျူတာထဲမှာ ရှိတဲ့ လျှို့ဝှက်တဲ့ သတင်း အချက်အလက်တွေရော၊ သာမန် သတင်း အချက်အလက်တွေကိုပါ တခြား နေရာတွေကို ဒီကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကနေ ပေးနေတာကို ကျနော်တို့ ကြုံတွေ့ နေရပါတယ်။ ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ရှိနေတာကြောင့် ကျနော်တို့ရဲ့ ကွန်ပျူတာတွေလည်း ပုံမှန် မလည်ပတ်ဘဲ ဖြစ်နေပါတယ်။"
တိဘက် ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်းလားမားရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်ကို လက်ခံရရှိတဲ့ နိုင်ငံခြား သံတမန် တဦးကို တရုတ် အစိုးရက တိဘက် ဘုန်းတော်ကြီးနဲ့ မတွေ့ဖို့ သတိပေးခြင်း ခံရတယ် ဆိုတာကို တိဘက် လူမျိုးတွေ သိလိုက်ရတဲ့ အချိန်က စပြီး အင်တာနက် သူလျှို လုပ်ငန်း တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်နေတယ် ဆိုတာ သိလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ အင်တာနက် သူလျှို လုပ်ငန်းကို တရုတ် အစိုးရက လုပ်နေတယ် ဆိုတာတော့ သက်သေ အထောက်အထား မရှိဘူးလို့ ပြည်ပရောက် တိဘက် အစိုးရရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဆမ်ဖဲလ်က ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ဒလိုင်းလားမားရဲ့ ကွန်ပျူတာ ထဲကနေ သတင်း အချက်အလက်တွေကို ထိထိရောက်ရောက် အရယူနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်လို့ အရမ်းကို အောင်မြင်တယ်လို့ ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်လို့ သူက ဆက်ပြီး ပြောသွားပါတယ်။
"အတတ်ပညာကို လွဲမှားစွာ အသုံးပြု နေတာက စိုးရိမ်စရာ ကောင်းပါတယ်။ နောက်ထပ် စိုးရိမ်စရာ အချက်ကတော့ ဒီလို လုပ်နေတာတွေဟာ ကျင့်ဝတ် သိက္ခာနဲ့ မကိုက်ညီတာ ဖြစ်ပါတယ်။"
အင်တာနက် သူလျှို လုပ်ငန်းဟာ ကွန်ပျူတာထဲမှာ ရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ အီးမေးလ်တွေကိုတင် ရှာနိုင်တာ မဟုတ်ဘဲ သူလျှို လုပ်တာကို ခံနေရတဲ့ ကွန်ပျူတာနဲ့ တခန်းထဲမှာ အင်တာနက်နဲ့ သုံးနေတဲ့ ဗီဒီယို ကင်မရာတွေနဲ့ မိုက်ကရိုဖုန်းတွေကို အသုံးပြုပြီး စကားပြောနေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုပါ ထောက်လှမ်း ထားနိုင်တယ်လို့ ကနေဒါက လေ့လာ စုံစမ်း စစ်ဆေးသူတွေက ဆိုပါတယ်။
ကိန်းဘရစ်ခ်ျ တက္ကသိုလ်က သီးခြား ထုတ်ပြန်တဲ့ အစီရင်ခံစာ တခုကလည်း အခုလို ကနေဒါဘက်က ပြောဆိုတာကို သဘောတူ ထားပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်က စခဲ့တဲ့ အင်တာနက် ကွန်ရက် တိုက်ခိုက်မှု အားလုံးနီးပါးဟာ တရုတ်နိုင်ငံက အစပြုတာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆို လိုက်ပါတယ်။
လေ့လာသူတွေ ဘက်က အခုလို စွပ်စွဲ ပြောဆို နေတာတွေဟာ တရုတ်နိုင်ငံကို ခြိမ်းခြောက်မှုလို့ မြင်လာအောင် အနောက် နိုင်ငံတွေဘက်က နိုင်ငံရေး အရ လုပ်ဆောင်တာသာ ဖြစ်တယ်လို့ တရုတ် သတင်း မီဒီယာတွေက ချေပ ပြောဆို လိုက်ပါတယ်။
Publish at Scribd or explore others: Humanities Other Burma
မြန်မာနိုင်ငံ၏လျပ်စစ်ဓာတ်အား နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်သည် မဂ္ဂါဝပ် ၁၀၀၀ ရှိပြီး တည်ဆောက်ပြီးစီးသော ရေအားလျပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများမှ ၅၉၉ မဂ္ဂါဝပ်ရရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လျပ်စစ်ဓာတ် အား နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်သည် မဂ္ဂါဝပ် ၁၀၀၀ ရှိပြီး မဟာဓာတ် အားလိုင်းစနစ်တွင်အကျုံးဝင်သော တည်ဆောက်ပြီးစီးသည့် ရေအား လျပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများမှ ၅၉၉ မဂ္ဂါဝပ်ရရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ လျပ်စစ်ဓာတ်အား သုံးစွဲမှု အများဆုံးတိုင်းမှာ ရန်ကုန် တိုင်းဖြစ်ပြီး ၄၅၀ မဂ္ဂါဝပ်ဝန်းကျင် အသုံးပြုနေသည်ဟုသိရသည်။
နွေရာသီအတွင်း တစ်နိုင်ငံ လုံးအတွက်ဖြန့်ဝေနိုင်သောလျပ်စစ် ဓာတ်အားပမာဏမှာမဂ္ဂါဝပ် ၈၀၀ မှ ၉၀၀ ကြားသာရှိပြီး မိုးရာသီ တွင် မဂ္ဂါဝပ် ၁၀၀၀ မှ ၁၁၀၀ ကြား ထိ ဖြန့်ဖြူးနိုင်သည့်အတွက် ¤င်း ရာသီချိန်တွင် လျပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်ချက်ကိုအပြည့်အ၀ဖြည့်ဆည်း နိုင်မှုရှိကြောင်းသိရသည်။
လက်ရှိအချိန်၌ ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်းရှိ မြို့နယ်များတွင်ရပ်ကွက် အလိုက်အုပ်စုခွဲထားကာအလှည့်ကျ မီးပေးစနစ်ဖြင့်လျပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့် ဖြူးပေးထားပြီး အရေးကြီးသော ဌာနဆိုင်ရာနေရာများနှင့်ဆေးရုံများ သာ ၂၄ နာရီလျပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်ဟုရန်ကုန်မြို့တော် လျပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးနှင့် သက် ဆိုင်သောမဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ် အတွင်းတွင်အကျုံးဝင်ပြီးတည်ဆောက် ပြီးသည့် ရေအားလျပ်စစ်ဓာတ်အား ပေးစက်ရုံများမှာ ဆည်တော်ကြီး၊ ဘီလူးချောင်း(၁)၊ ဇော်ဂျီ(၁)၊ ဇော်ဂျီ (၂)၊ ဇောင်းတူ၊ သဖန်းဆိပ်၊ ပေါင်း လောင်း၊ မုန်း၊ ပသိ၊ ရဲနွယ်၊ ခပေါင်း နှင့်ကျိုင်းတောင်းစက်ရုံ တို့ဖြစ်ပြီး တည်ဆောက်ဆဲစီမံကိန်းများမှာရှမ်း ပြည်နယ်၌ ရွှေလီစီမံကိန်း၊ အထက် ကျိုင်းတောင်းစီမံကိန်း၊ မန္တလေးတိုင်း တွင် ရဲရွာစီမံကိန်း၊ အထက်ပေါင်း လောင်းစီမံကိန်း၊ နန်ချိုစီမံကိန်း၊ မကွေးတိုင်းအတွင်းတွင်မုန်းချောင်း တစ်လျောက်ရှိ အောက်ဗူးစီမံကိန်း၊ အထက်ဗူးစီမံကိန်းနှင့် ကြီးအုံကြီးဝ စီမံကိန်း၊ ချင်းတွင်းမြစ်ဝှမ်းတွင်ထမံသီ၊ ရွှေစာရေး၊ မဏိပူရ၊ ရာဇဂြိုဟ်နှင့် မြစ်သာစီမံကိန်းများ၊ ပဲခူးတိုင်းတွင် ဖြူးချောင်း၊ ကွန်းချောင်း၊ ရွှေကျင်၊ သောက်ရေခပ်(၂)စီမံကိန်းများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်သူဌေးချောင်း စီမံကိန်း၊ စိုင်တင်စီမံကိန်း၊ အမ်း ချောင်းစီမံကိန်းစသည်တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) တွင် တည်ဆောက်လျက်ရှိသည့် မဂ္ဂါဝပ် ၆၀၀ ရှိသော ရွှေလီရေအား လျပ်စစ်စီမံကိန်းသည် ထိုင်းနိုင်ငံ နှင့်အကျိုးတူပေါင်းစပ်လုပ်ကိုင်နေ သော စီမံကိန်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် သံလွင်စီမံကိန်း၊ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ စီမံကိန်း စသည့်စီမံကိန်းကိုလည်း အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်ကွင်း ဆင်းတိုင်းတာ ပြင်ဆင်လျက်ရှိ သည်ဟု ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် များအရ သိရသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/31/2009 1 အကြံပြုခြင်း
High Levels of Lead and Arsenic
Daw Tway ‘Go Mo Dah’: Sample 1 purchased at Nupo camp market; sample2purchased ataMaela store (I believe in Maela 2). Has high levels of lead and arsenic. Apparently this is used foravariety of ailments in babies and children, including digestive problems and colds.
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/30/20090အကြံပြုခြင်း
ဒီခွက်ထဲမှာ ကျည်ဆံတစ်တောင့် လာထည့်ထားလျှင် ပြေးပေတော့
မနေ့က အွန်လိုင်းပေါ်မှာ မလေးရှားက မိတ်ဆွေ တစ်ယောက် နှင့် တွေ့လို့ စကားပြောဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဘယ်ဈေးပေါက်နေလဲ ဟုမေးကြည့်ရာ ရောင်းဈေး ၃၀၀၊ ပြန်တက် ၂၂၀၀၀၊ တစ်ဆင့်ပြန်ရောင်း ၄၀၀၀၀ လို့ ဆိုပါတယ်။ ကျနော်တို့ပြောနေကြတာ ကုန်ပစ္စည်း ဈေးနှုန်းမဟုတ်ပါ။ မလေးရှား နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လူကုန်ကူးမှု ဈေးကွက် (Market of Human Trafficking) မှာ ဗမာတစ်ယောက် ရဲ့ တန်ဖိုး (တစ်နည်းအားဖြင့်) ဗမာတစ်ယောက်၏ ပေါက်ဈေးဖြစ်ပါသည်။
ကျနော့်မိတ်ဆွေမှာ လူပွဲစားတစ်ယောက် မဟုတ်ပါ။ သူက မလေးရှား နိုင်ငံတွင် နေလာခဲ့သည်မှာ ၁၃ နှစ်ကျော်ပြီ။ မလေးစကားကိုလည်း ကောင်းကောင်းပြောနိုင်သည်။ သူ နှင့် ကျနော် ကွာလာလမ်ပူရှိ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်စဉ်က သိကျွမ်းခဲ့ကြသည်။ ထိုစဉ်က သူလုပ်နေသော အလုပ် အလုံးစုံ ကို ကျနော်မသိခဲ့ပါ။ နောင်အခါ ကျနော် နေစရာ အခက်အခဲဖြစ်သောအခါတွင် သူ့အိမ်တွင်လိုက်နေမှ သူလုပ်နေသည့်အလုပ်ကို ကောင်းကောင်းသိခဲ့ရသည်။
ဤနေရာတွင် မလေးရှား နိုင်ငံရှိ တရားမ၀င် ဗမာအလုပ်သမားများအကြောင်းကို အကျယ်တ၀င့် ရေးမနေတော့ပါ။ သတင်းဌာန အတော်များ များတွင် အခြားသူများလည်း ရေးနှင့်ခဲ့ပြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ကျနော့်မိတ်ဆွေသည် မလေးရှားရှိ သူနှင့် နီးစပ်သော တရားမ၀င်အလုပ်သမားများ (သို့မဟုတ်) အခြားအလုပ်သမား တစ်ယောက်ယောက် အလုပ်မရှိလျှင် သော်လည်းကောင်း၊ ရဲအဖမ်းခံရလျှင် သော်လည်းကောင်း၊ သူဋ္ဌေး ညစ်လျှင်သော်လည်းကောင်း လိုက်လံပြီး ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ အကယ်၍ အလုပ်သမားတစ်ဦးဦး ထောင်ကျ၍ ထိုင်းနယ်စပ်ရှိ ပွဲစားများထံ ရောင်းစားခံရသောအခါ၊ ထိုအလုပ်သမားက ဗမာပြည်သို့ မပြန်ဘဲ ကွာလာလမ်ပူသို့ ပြန်တက် လာချင်သောအခါ ကျနော့်မိတ်ဆွေက သူတတ်စွမ်းသ၍ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသည့် အလုပ်ကို လုပ်ပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဆိုရပါမူ Volunteer အလုပ်ဟု ဆိုရမည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ့်အိပ်ထဲက စိုက်ကုန်ရသည်များလည်း ရှိသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် တရားမ၀င် အလုပ်သမားတစ်ယောက်အဖမ်း ခံရသည်ဆိုပါစို့။ ပထမ ဦးစွာ ရဲက ထိုအလုပ်သမားအား ရဲစခန်းတွင် ထွက်ဆိုချက်ပေးရန် မေးခွန်းများ စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းခံရမည်။ အကယ်၍ တရားရုံးတင်၍ စွပ်စွဲ စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းခံခဲ့ရလျှင်၊ အဆိုပါ အလုပ်သမားထွက်ဆိုသည့်အရာများကို သက်သေအဖြစ် ယူဆနိုင်သည်။ အကယ်၍ ထိုအလုပ်သမား အား ရဲက ရက်ပေါင်း (၁၄) ရက်ထက် ကျော်ပြီး ချုပ်ထားလိုပါက၊ သူတို့သည် တရားရုံး (အောက်ရုံးရှိ) တရားသူကြီးထံမှ ခွင့်ပြုချက် ရယူရပါမည်။ ရဲစခန်းတွင် ထိမ်းသိမ်းခံနေရစဉ်အတွင်း ထိုအလုပ်သမားအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေသုံးခုမှာ (ငွေကြေးနှင့်ဖြေရှင်း၍ရလျှင်) ရဲက လွှတ်ပေးမည်၊ ဒုတိယတစ်ခုမှာ (ငွေကြေးနှင့် ဖြေရှင်း၍ မရလျှင်) တရားရုံးတင်၍ စစ်ဆေးမည်။ နောက်ဆုံးတစ်ခုမှာ လ၀က ထိန်းသိမ်းရေးစခန်း (immigration camp) ထဲသို့ ပို့မည်။
အကယ်၍ တရားမ၀င်အလုပ်သမား တစ်ဦးအား ရုံးတင်စစ်ဆေးခဲ့သော်……..
တရားရုံး (အောက်ရုံး၌) UNHCR (သို့) လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုသို့ အကြောင်းကြားရမည်။ (မှတ်ချက်။ ။ မြန်မာသံရုံးမပါ။) UNHCR နှင့် အဖမ်းဆီးခံရသူ၏ အသိမိတ်ဆွေအသိုင်းအ၀ိုင်းကို ဆက်သွယ်၍ မရခဲ့လျှင် အောက်တရားသူကြီးရုံးအား UNHCR ရုံးသို့ ဆက်သွယ်ဖို့ရန် ခွင့်တောင်းရမည်။ မိမိအား ကူညီပေးမည့် ရှေ့နေတစ်ဦးဦးကို ဥပဒေအကျိုးတော်ဆောင် ဋ္ဌာနတွင် အကူအညီတောင်းခံမည်။ မလေးဘာသာ စကားကို နားမလည်လျှင် စကားပြန် တစ်ယောက်ကို အကူအညီတောင်းခံမည်။ မိမိသည် မိသားစုကို ကြည့်ရှုသူဖြစ်ကြောင်း၊ ငွေကြေးအခက်အခဲ နှင့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေများကို တရားသူကြီးထံပြောပြရမည်။ မိမိ၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့် အခွင့်အရေး ကို ကာကွယ်ရန် တရားသူကြီးတွင် တာဝန်ရှိသည်ဆိုသည်ကို သိထားရမည်။ အကယ်၍ တရားရုံးက မိမိသည် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ကြောင်း စွပ်စွဲခံရလျှင် (မည်သည့်အခြေအနေဖြစ်နေပါစေ) မှားပါသည် ဟု (ထိုကဲ့သို့ အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်စေသည့် စကားဖြင့်) ၀န်မခံသင့်ပါ။ တရားရုံးတွင် စွဲချက်တင်ခြင်းခံရသည့် အမှုနံပါတ်နှင့် ဖြစ်နိုင်ပါက စွဲချက်မိတ္တူကို တောင်းယူရမည်။ နောက်ဆုံး စီရင်ချက် ချမှတ်လျှင် ထောင်ဒဏ် (သို့) ငွေဒဏ် (သို့) ကြိမ်ဒဏ် တစ်ခုခု ဖြစ်နိုင်သည်။ စီရင်ချက်ချ မှတ်လျှင် စီရင်ချက်ကို အသနားခံရမည်။ ကြိမ်ဒဏ်မပေးရန်တောင်းဆိုရမည်။
အထက်ပါ ဖော်ပြချက်မှာ မလေးရှားနိုင်ငံတွင် အဖမ်းအဆီးခံရသည့် တရားမ၀င် အလုပ်သမားတစ်ယောက် သိထားရမည့်အချက်များ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် စီရင်ချက်သည် ထောင်ဒဏ်ဖြစ်သည် ဆိုပါစို့။ ထိုအလုပ်သမားသည် ထောင်ထဲတွင် တစ်လ မှ လေးလ လောက်အထိ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရမည်။ ထိုအတောအတွင်း ထို အလုပ်သမားအား ထောင်အာဏာပိုင်များက ထိုင်းနယ်စပ်တွင် သွားရောက်စွန့်ပစ်ခံရန် လက်ခံနိုင်၊ လက်မခံနိုင်ကို မေးမည်။ ထိုအခါ ထောင်တွင်းတွင် အစာရေစာ ၀၀ လင်လင် မစားရ၍ သော်လည်းကောင်း၊ ထောင်ထဲရှိ အခြား နိုင်ငံသားများ (အင်ဒိုနီးရှား နှင့် ဘင်္ဂလား ကုလားများ) ၏ အနိုင်ကျင့် ထိုးကြိတ်ခြင်းကို မခံနိုင်ကြ၍ သော်လည်းကောင်း၊ စွန့်ပစ်မည့် အစီအစဉ်ကို လက်ခံကြ သည့်သူများသည် ရောင်းစားခြင်းကို ခံကြရသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဆိုသော် လူကုန်ကူးခြင်းကို ခံကြရသည်။ စွန့်ပစ်ဖို့ လက်မခံသူများသည် ထောင်ထဲတွင် UNHCR မှ အရာရှိများ လာရောက် ကယ်ထုတ်နိုင်မည့် နေ့ကို စောင့်ရင်း နှစ်ပေါင်းများစွာ ထောင်ထဲ၌ပင် ဒုက္ခ ဆက်လက်ခံကြရသည်။ ယခင်က UN မှ အရာရှိများက ထောင်သားများကို လာရောက်ပြီး ကယ်တင်၊ ထုတ်ယူခွင့် ရှိသော်လည်း၊ ယခုတွင် UNHCR အား မလေးအာဏာပိုင်များက ထောင်းတွင်းသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခွင့် မပေးတော့ပါ။ မိမိတွင် ထောင်ဝင်စာ လာတွေ့မည့်သူရှိလျှင် အနည်းဆုံး တစ်လ တစ်ခါတော့ အူစို (ဖွယ်ဖွယ်ရာရာလေး စားကြရသည်) ကြရသည်။
၁၉၉၅/၉၆ လောက်ကဖြစ်သည်။ မလေးရှား နိုင်ငံတွင် ဗမာအလုပ်သမားများ ဗီဇာသက်တမ်းကျော်ပြီး စတင် နေထိုင်စ ကာလ ကဖြစ်သည်။ မလေးအစိုးရက ဗမာနိုင်ငံသားတွေ မလေးရှားနိုင်ငံတွင် တရားမ၀င် နေထိုင်သည့် ကိစ္စနှင့် ပက်သက်၍ ဗမာအစိုးရကို ဆွေးနွေးရာ၊ ဗမာအစိုးရက မလေးရှားနိုင်ငံတွင် တရားမ၀င် အလုပ်လုပ်နေသော ဗမာများသည် ဗမာပြည်တွင်းမှ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသော ပြည်ပြေးများသာဖြစ် ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ဗမာ အစိုးရတွင် တာဝန်မရှိကြောင်း ငြင်းလိုက်သည့်အတွက်၊ ထိုအချိန်ကစပြီး မလေးရဲတွေက ဗမာတွေကို ဖမ်းမိသည့်အခါ ထိုင်း-မလေးရှား နယ်စပ်တွင် သွားလွှင့်ပစ်ပါတော့သည်။ ၉၉/၂၀၀၀ လောက်က စပြီး၊ မလေးရဲတွေက ဖမ်းမိတဲ့ ဗမာတွေကို ထိုင်းရဲလက်ထဲကို အပ်ပါသည်။ ထိုင်းရဲတွေက တစ်ဆင့် ထို ဗမာများကို ရနောင်း ဘက်တွင် သွားလွှင့်ပစ်ပါသည်။ တရားမ၀င် ဗမာအလုပ်သမား စွန့်ပစ်ရေးကိစ္စနှင့် ပက်သက်ပြီး မလေးအာဏာပိုင်များ နှင့် ထိုင်းအာဏာပိုင်တို့အကြား သဘောထား တင်းမာမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း မလေးရဲတွေက ဗမာတွေကို ထိုင်းနယ်စပ်ကို သွားပစ်ပါသည်။ အဲဒီ နောက်ပိုင်း ၂၀၀၇ ခုနှစ် နှစ်ဦးပိုင်းက စပြီး မလေးရဲတွေက ဗမာတွေကို ထိုင်းနယ်စပ်ရှိ ပွဲစားတွေလက်ထဲကို ရောင်းပါတော့သည်။ ထို အချိန်မှ စပြီး၊ ထိုင်း နှင့် မလေး နယ်စပ်တို့တွင် လူကုန်ကူးမှုသည် တစ်စတစ်ခု ကြီးထွားလာကာ ဗမာကျွန်ရောင်းဝယ်ရေး စနစ်သည်လည်း အသက်ဝင်လာခဲ့သည်။
မိမိအား ထိုင်း - မလေးရှား နယ်စပ်တွင် စွန့်ပစ်ရန် သဘောတူကြသည့်သူများကို မလေးရဲက ထိုင်း နယ်စပ်တွင်ရှိသော ထိုင်း ပွဲစားများထံ မလေးရင်းဂစ် ၃၀၀ နှင့် ရောင်းစားသည်။ ထို ထိုင်းပွဲစားများ လက်အောက်တွင် ဗမာ အပါအ၀င်၊ တိုင်းရင်းသား ပွဲစားများက ဝေစား၊ မျှစား စနစ်ဖြင့် လူပွဲစားအလုပ်ကို လုပ်ကြသည်။ ထိုပွဲစားများ လက်ထဲသို့ရောက်သွားပါက ရွေးချယ်ရန် လမ်းနှစ်လမ်းထဲမှ တစ်လမ်းကို ရွေးနိုင်သည်။ ပထမ တစ်ခုမှာ ဗမာပြည်ကို ပြန်မလား၊ သို့မဟုတ်၊ ကွာလာလမ်ပူသို့ ပြန်တက်မလား။ ဗမာပြည်သို့ ပြန်မည်ဆိုလျှင် ပွဲစားလက်ထဲမှ မိမိအား ပြန်ဝယ်ရန် ဗမာပြည်ရှိ မိမိ၏ မိသားစု (သို့မဟုတ်) ဆွေမျိုးများအား ပွဲစားက အကြောင်းကြားပေးမည်။ ကွာလာလမ်ပူသို့ ပြန်တက်မည်ဆိုလျှင် မိမိအား ပွဲစားလက်ထဲမှ ထိုင်းဘတ် ၂၂၀၀၀ နှင့် ၀ယ်ရန် မလေးရှိ မိမိ၏ မိတ်ဆွေ တစ်ဦးဦးအား ပွဲစားက ဆက်သွယ်ပေးမည်။ ပိုက်ဆံလွှဲရန် ၄င်း၏ ဘဏ်စာရင်း နံပါတ်အားပေးလိုက်မည်။ ၂၂၀၀၀ ရပါက ပွဲစားက မိမိအား အခြားပွဲစား တစ်ဦးဦးလက်သို့ အပ်ကာ ကွာလာလမ်ပူ အထိအရောက်ပို့ပေးမည်။ ယခင်က ကွာလာလမ်ပူသို့ ပြန်တက်လျှင် ထိုင်းဘတ် ၁၅၀၀ ပေးရသော်လည်း၊ ယခုအခါ ဘတ် ၂၂၀၀၀ အထိ ပေးကြရကြောင်း၊ ရောင်းစားခံခဲ့ကြရသော ဗမာအလုပ်သမားများ ထံမှ သိရသည်။ ထို လမ်းကြောင်း နှစ်ခု ထဲမှ တစ်ခုခုအား ရွေးချယ်ရန် ပွဲစားက ရက်အနည်းငယ် အချိန်ပေးမည်။ သို့သော် မိမိအား ၄င်းလက်ထဲတွင် ကြာကြာထားမည်မဟုတ်။ ရက် အကန့်အသက်ဖြင့်သာ။ ထိုရက်ကျော်သွားပါက ထိုင်း နိုင်ငံတွင်းရှိ ရာဘာခြံတစ်ခုခု သို့ ဗမာတစ်ယောက် ကို ကျွန်အဖြစ် ထိုင်းဘတ် ၄၀၀၀၀ ဖြင့် ရောင်းစားမည်။
ကွာလာလမ်ပူသို့ ပြန်တက်မည့်သူများသည် ထောင်တွင်း၌ရှိနေစဉ်ကတည်းက မိမိအား စွန့်ပစ်ရန် သဘောတူညီပြီးသော်၊ မိမိမိတ်ဆွေမှ နောက်တစ်ကြိမ်ထောင်ဝင်စာ လာတွေ့ပါက မိမိအနေဖြင့် မည်သည့်နေ့၊ မည်သည့်ရက်တွင် မလေးနယ်စပ်သို့စွန့်ပစ် (ရောင်းစား) ခံရတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ပွဲစားလက်ထဲမှ မိမိအား ပြန်ဝယ်ပေးပါရန်၊ မိမိမိတ်ဆွေတွင် ငွေကြေးအလုံအလောက်မရှိပါက စုပေါင်း စပ်ပေါင်း ချေးငှားပြီး မဖြစ်ဖြစ်သည့်နည်းနှင့် ၀ယ်ပေးပါရန် ပြောရတော့သည်။ ထိုအခါ သူ့အလှည့်၊ ကိုယ့်အလှည့် ဆိုတာ ရှိသည့်အတွက် ကြောင့် အလုပ်လုပ်နေသော (အဖမ်းဆီးမခံရသေးသော၊ မိမိတို့လည်း တရားမ၀င် အလုပ်လုပ်နေကြရသော) အလုပ်သမားများက စာနာထောက်ထားစွာ ၀ိုင်းဝန်းကူညီကြသည်။ သို့သော် အချို့က ကူညီချင်သော်လည်း အလုပ်အကိုင်က အဆင်မပြေ (ယခု အချိန်အခါမျိုးသည် အဆိုးဆုံးအခြေအနေဖြစ်ပါသည်)။ ထိုအခါမျိုးတွင် ရော်ဘာခြံသို့ ဘတ်လေးသောင်း ဖြင့် ရောင်းစားခံကြရသည်။
ရာဘာစက်ရုံတစ်ခုမှ မြန်မာ အလုပ်သမားများ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ
ရာဘာ စက်တစ်ခုတွင် အလုပ်လုပ်နေကြသော မြန်မာ အလုပ်သမားများ
ရာဘာခြံသို့ရောက်သော် ထိုင်းသူဋ္ဌေးက မျက်နှာသာမပေး။ ရာဘာခြံမှ ထိုင်းအလုပ်သမားများက မကျေနပ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် (ရောင်းစားခြင်းမခံရသော) သာမန် အလုပ်သမားတစ်ယောက် ရာဘာခြံတွင် အလုပ်ရပါက ထိုအနေရာတွင်ပင် အလုပ်အကိုင် အခြေတကျဖြင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ပင်။ ၀င်ငွေလည်းမှန်သည်။ ထိုအခါ အခြားသူများလည်း အလုပ်လာလျှောက်ချင်ကြသည်။ သို့သော် ရာဘာခြံတစ်ခြံမှာ ရာဘာခြစ်သည့် အလုပ်ရရန်မှာ မလွယ်ကူပါ။ အလုပ်ရလျှင်လည်း နှစ် နှင့်ချီပြီး စားပေဦးတော့။ ထိုအခါ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရာဘာခြံများ၌ ထိုင်းအလုပ်သမားများအကြား၊ ဗမာ အလုပ်သမားများအကြား၊ ထိုင်း နှင့် ဗမာအလုပ်သမားများအကြား ခြံလုသော ပြဿနာ ကြီးထွားလာသည်။ မိမိရာဘာ ခြစ်သည့် ခြံအတွင်း ရာဘာစေးခံသည့် ခွက်ထဲ၌ သေနတ်ကျည်တစ်တောင့် လာထည့်ထားသည်ကို တွေ့ပါက ပြေးပေတော့။ သို့မဟုတ်ပါက မကြာမီ အသတ်ခံရမည်။ ရာဘာခြံ အလုပ်သမားများသည် ရာဘာခြစ်ရန် မနက် ၂ နာရီ၊ ၃ နာရီ ထပြီး ခြစ်ကြရသည်။ ရာဘာစေး က အေးသည့်အချိန်တွင် ထွက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ မနက် မိုးလင်းလျှင် ရာဘာစေးက သိပ်မထွက်တော့။
ရာဘာချေး ကျုံးနေသော မြန်မာ အလုပ်သမားများ
မနက်စောစောစီးစီး အလင်းရောင်က မလာသေး။ မိမိတွင်ပါလာသော မှိန်ဖျဖျ မီးအိမ်ကလေးဖြင့် တစ်ယောက်တစ်နေရာတွင် နေရာခွဲပြီး ရာဘာခြစ်ကြရသည်။ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက် သဲသဲကွဲကွဲ မမြင်ရ။ ထိုအချိန်မျိုးတွင် ရာဘာခြံတွင်း လူသတ်မှု အဖြစ်များသည်။ မနက်မိုးလင်းသော် မိမိအဖော် ပါမလာ၍ ဟိုရှာ၊ သည်ရှာ၊ ရှာတော့မှ အလောင်းကို ချောင်းစပ်၊ မြောင်းစပ်တွင် သွားပစ်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် အခေါက်က ကျနော် ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ နာခွန်ဆီ ထမရတ်ခရိုင်၊ နာဘွန်မြို့က ဗမာအလုပ်သမားများ နေထိုင်ရာ ရာဘာတော သို့ အလည်သွားခဲ့စဉ်က၊ ကျနော် ထိုနေရာသို့ မရောက်မီ တစ်ပတ်အလိုတွင် အလားတူ လူသတ်မှုတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်ကိုကျနော်နှင့် အတူနေခဲ့သူ ရာဘာခြံအလုပ်သမားတစ်ဦးကပြောပြ၍ သိခဲ့ရသည်။
ထိုအခါ အထက်တွင်ရေးခဲ့သလိုမျိုး ရောင်းစားခံထားရသော ဗမာ အလုပ်သမားတစ်ယောက် (ဗမာကျွန်တစ်ယောက်)က မိမိအလုပ်လုပ်နေ သော ရာဘာခြံအတွင်း ရာဘာစေးခွက်ထဲ၌ ကျည်ဆန်တစ်တောင့် ကိုတွေ့၍ ထွက်မပြေးခဲ့သော်၊ အသက်အန္တရာယ် အတွက် စိုးရိမ်ရသည်။ ထွက်ပြေးခဲ့သည် ငွေဝယ်ကျွန်ဖြစ်သည့်အတွက် သူဋ္ဌေးက ရန်ရှာမည်။ ရွေးစရာ လမ်းမရှိ၊ ပြေးစရာ မြေမရှိ။ ခေတ်သစ် ကျွန်ပိုင်ရှင်စနစ် မှ ဗမာကျွန်များ၏ ဘ၀က ဆိုးဝါးလှသည်။
အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ သတင်းစာ အပိုင်းအစလေး ကို ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါသည်။ ကျနော် မလေး မှာ ရှိစဉ်တုန်းက ၂၀၀၇ ခုနှစ် မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့ထုတ် New Straits Times သတင်းစာထဲမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ တစ်နေ့ ဒီဆောင်းပါးကို ရေးမယ်လို့ စိတ်ကူးထားသည့်အတွက် အဲဒီ သတင်းလေးကို ဖြတ်ပြီး သိမ်းထားခဲ့တာပါ။ အောက်မှာ သတင်းကို ဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ်။
ဆော်ဒီ အာရေဗီးယား နိုင်ငံကနေ သေဒဏ်ပေးထားခံရခြင်းမှ လွတ်မြောက်လာသူ ဖိလစ်ပိုင် အိမ်ဖော် ဆာရာ ဒီမတ်ထရာ (ပုံ - ညာ) ကို ဖိလစ်ပိုင် သမ္မတ ဂလော်ရီယာ အာရိုယိုက မနေ့က (၁၀.၅.၂၀၀၇) မနီလာရှိ မာလကန်နန် သမ္မတနန်းတော်မှာ ဆော်ဒီ အစိုးရထံမှ လွှဲပြောင်း လက်ခံယူလိုက်ပါတယ်။ ဆော်ရီအာရေဗီးယား နိုင်ငံတွင် အိမ်ဖော်အဖြစ် အလုပ်လုပ်နေသူ ဆာရာဟာ ၁၉၉၂ ခုနှစ်က သူမရဲ့ အလုပ်ရှင် သူဋ္ဌေးအမျိုးသမီးကို တုတ်နဲ့ ရိုက်သတ်ခဲ့တဲ့အတွက် သေဒဏ်ပေးထားခြင်းခံရပြီး၊ ထောင်ထဲမှာလည်း ၁၅ နှစ်ကြာ ချုပ်နှောင်ထားခြင်းခံရပါတယ်။ အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်မှာ သူမ (ဒီမတ်ထရာ) မှာ လေးနှစ်အရွယ် သမီးလေးရှိပါတယ်။ ဆော်ဒီ အာရေဗီးယား နိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေအရ ကလေးဖြစ်သူ အသက်၁၈ နှစ် မပြည့်ခင်မှာ မိခင်ဖြစ်သူကို သေဒဏ်ပေးခွင့် မရှိသေးပါဘူး။ အာရိုယိုဟာ ဆော်ဒီ ဘုရင် အဗ္ဗဒူလာ နဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် (၂၀၀၆) မေလမှာ တွေ့ဆုံပြီး၊ ဆော်ဒီအာရေဗီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားတွေရဲ့အရေးကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ထိုဆွေးနွေးမှုဟာ သေဒဏ်ချထားခြင်းခံရသူ ဒီမတ်ထရာ အတွက် လွတ်မြောက်ဖို့ အခွင့်အရေးတစ်ခုတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အသတ်ခံရသူ သူဋ္ဌေးမ မိသားစုက ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရအား တရားခံ ဒီမတ်ထရာ ရဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကို ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ဆိုရင် ဖိလစ်ပိုင်ငွေ ပီဆို ၄၈ သန်း (မလေးငွေ ရင်းဂစ် ၃.၄ သန်း) ပေးရမယ်လို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရနဲ့ ငွေကြေးလှူဒါန်းမည့်သူအချို့က ထိုအချက်ကို သဘောတူညီပြီး လူ့အသက်တစ်ချောင်း ကယ်တင်ရေးလှူဒါန်းငွေတစ်ရပ်အနေနဲ့ တရားလို မိသားစုကို ဖိလစ်ပိုင်ငွေ ပီဆို ၄၈ သန်းကို ပေးလိုက်ပါတယ်။ ထို လှူဒါန်းငွေ ၄၈ သန်းထဲက ပီဆို ၈ သန်းကို နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးတွေက စုပေါင်းလှူဒါန်း တာဖြစ်ပြီး၊ ပီဆို တစ်သန်းကို အရှေ့အလယ်ပိုင်း နိုင်ငံတွေက လှူဒါန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မတာ အာရိုယို ရဲ့ ဆော်ဒီ ခရီးစဉ် အပြီးမှာ၊ ဆော်ဒီ အာရေဗီးယား နိုင်ငံက ဖိလစ်ပိုင်အလုပ်သမား တစ်ထောင်ကို သူတို့ရဲ့အလုပ်ရှင်တွေက အကြမ်းဖက်မှု နဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာ တွေကြောင့် ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံကို ပြန်ပို့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ ဖိလစ်ပိုင် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန က အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူ အာတူရို ဘရီယွန် က မကြာသေးမီက ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါ သတင်းကို ဖတ်ကြည့်လျှင် တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူရဲ့ မိမိ လူမျိုးအပေါ် (အိမ်ဖော်ပင် ဖြစ်လင့်ကစား) လူလူချင်း တန်ဖိုးထားတယ် ဆိုတာ ပေါ်လွင်နေပါတယ်။ နောက်ပြီး ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ကိုလည်း တွေ့ရမှာပါ။ ဒီမတ်ထရာ ဆိုသူ အိမ်ဖော်ရဲ့ တန်ဖိုး နဲ့ ထိုင်း - မလေးနယ်စပ်မှာ ရောင်းစားခံနေရတဲ့ ဗမာကျွန်တွေရဲ့ တန်ဖိုးဟာ ဘယ်လောက်ကွာခြားသလဲဆိုတာ အခြေအနေနှစ်ရပ်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြခဲ့ပါပြီ။
ကျွန် ဆိုရာ၌ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွန် နှင့် အခြေအနေအရ ကျွန်ဟူ၍ နှစ်မျိုး နှစ်စား ခွဲပြီးပြောချင်ပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ ကျွန်အမျိုးအစားမှာ မိမိ ၏ စားဝတ်နေရေးအခြေအနေအရ သူများထံတွင် ကျွန်ခံပြီး အလုပ်လုပ်နေရသော သူများသာ ဖြစ်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွန်ဆိုသည်မှာ မိမိလူမျိုးအချင်းချင်း ဖိနှိပ်၊ ညှဉ်းဆဲသူ။ လွတ်မြောက်နိုင်သည့် လမ်းကြောင်း ကို မရှာဖွေချင်သူ။ မရှာဖွေသူ။ တစ်နေရာထဲတွင် မှီခိုကာ လွတ်မြောက်ရေးလမ်းကို မရှာဖွေသူသည်လည်း စိတ်ဓာတ်ရေးရာအားဖြင့် ကျွန်စိတ်ဓာတ်ဟု ဆိုချင်ပါသည်။ ရှင်းရှင်း ဆိုရသော် လွတ်လမ်းမရှာဘဲ မှီခိုချင်သည့် စိတ်ဓာတ်သည် ကျွန်စိတ်ဓာတ်သာလျှင်ဖြစ်သည်။ ဗမာ ကျွန်ရှိနေသ၍၊ ကိုယ်သည် ဗမာတစ်ယောက် (ဗမာနိုင်ငံဖွား) တစ်ယောက် ဖြစ်နေသ၍ ကိုယ်လည်းဘဲ ကျွန်မျိုး၊ ကျွန်နွယ်ဝင်ဖြစ်နေမည်။ ထို့ကြောင့် မိမိလူမျိုးအချင်းချင်း စာနာထောက်ထား၍၊ အားလုံးဝိုင်းဝန်း၍ ဗမာကျွန်စနစ် ပပျောက်သွားအောင် ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြမှသာ ဗမာကျွန် ဟူသော စကားလည်းပပျောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရေးသား လိုက်ရပါသည်။
တစ်လက်စ တည်း ကဗျာဆရာ ကောင်းကင်ကို ရဲ့ ကျွန် ကဗျာလေးကိုလည်း ဖတ်သွားစေချင်ပါသည်။ ရင်ကို ကိုင်လှုပ်သော ကဗျာတွေထဲက တစ်ပုဒ်ပါ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျွန်လို့ သုံးလို့ မငိုလိုက်ပါနဲ့ အမေရယ်။
ဒါကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို သခင်လို့ မျက်လုံးစုံမှိတ်ပြီး ကြွေးကျော်နေရမှာလား။
သူ့ ကိုလေးစားပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ အတွက်တော့ သူက
Posted by ကျော်သိင်္ခ http://kyawtheinkha.blogspot.com/
Publish at Scribd or explore others: stamp pre inked stamps
Burma Golf Club- Fort Wayne သို့ 
BY မလေးမေ ... 3/29/2009 1 အကြံပြုခြင်း
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/29/20090အကြံပြုခြင်း
ဒီကောင်ကျော်မိုးကလည်းသာပေါင်းညာစား၊အရင်ကဗန်ကူးဗားမှာ အိမ်ငှားနေဘို့ တောင်ပိုက်ဆံမရှိတဲ့ကောင်၊အခု
ကျပြန်တော့လူကြီးလူကောင်းအယောင်ဆောင် ထားပြီး မိန်းကလေးတွေကို လိုက်ဖျက်ဆီးနေတာ၊ သူစာသင်တဲ့
အော်တိုဝါကျောင်း ဗမာကလေးမလေးကို နို့ကိုင်မှုနဲ့ အဲဒီကျောင်းကထွက်ရတာ။ အခုလဲ လက်ရှိ ဖိလစ်ပင်းမယား
ကြီးနဲ့ကလေးငုတ်တုတ်ထားပြီး USA မှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ သွားအိပ်နေတဲ့ကောင်။